Indlela futhi Kungani Kufanele Ukwakha Ibhizinisi e-Dubai 🥇 【# No.1 e-Middle East】
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at April 19, 2019
Ungadala kanjani Ukuphila njengomphathi wezokuthengisa?
Kanjani Futhi Kanjani Business in Dubai Umuntu OneTurban
UJohne West - Dubai City Inkampani
Qasha noma Yiba Ngumkhakha Wokukhula Umphathi? Sawubona, igama lami nginguJohn West. Ngikulungele ukuthuthukisa inkampani yakho. Ngizokusiza ukuthola amakhasimende ku-Inthanethi naku-Linkedin !.
Ungumsunguli we- Dubai City Inkampani. Izinkampani zamazwe ezibalulekile zikubiza ngokuthi i-Growth Hacker ye Ukumaketha kwe-Intanethi eDubai. Izingosi ezaziwa kakhulu zokuxhumana nomphakathi zithi zingenye yabakhangisi abaphambili be-10 kwezokuxhumana.
Bangaphezu kwesigidi abantu ababuka izingosi zokuxhumana zikaJohn West Kuyaziwa ngokuhola i-Facebook no Amakhasi e-Linkedin. Le yinkampani yami futhi Injongo yethu ukukhuthaza iDubai!
Osomabhizinisi abaningi abavela eDubai naseLondon bathi badale enye yezinkampani eziphambili ze-100 zokukhangisa kwabezindaba zenhlalo eDubai.
UJohn ungumbhali wabathengisi emkhakheni wokuthengisa kwezokuxhumana futhi wabonwa njengomunye wosomabhizinisi abahamba phambili abangaphansi kweminyaka ye-30.
Yenza amakhasimende ajabule, sikusize ekutholeni imisebenzi yamaphupho eDubai.
Isikhundla SEO, Ukumaketha ku -Google kanye ne-Bing futhi kukhulunywa ngokujwayelekile, ukumaketha kushibhile?
Yebo, ngiyakwenza nge-50% yentengo.
Yini oyikhokhela iHacker Hacker?
Ukufakwa esikhundleni kuyinqubo eqhubekayo futhi edla isikhathi, yingakho kudinga imali eningi. Ngokukhetha insiza enhlanganweni yami uzothola, phakathi kwabanye:
Ukuhlaziywa nokusebenza okuphelele kokuqukethwe,
Ukulungiswa kwezihloko, isihloko se-meta tag kanye nencazelo,
Ukuhlelwa kwesakhiwo sezingxoxo zewebhusayithi kanye nezakhi zekhodi yomthombo,
Izenzo eziphathelene nokufinyelela okulungile kumarobhothi enjini yokusesha kwiwebhusayithi.
I-Google Toolkit Configurations (Google Analytics, njll),
Imisebenzi ehlobene nesipiliyoni sephrofayela yesixhumanisi (isakhiwo sokuxhumanisa).
Ukukhangisa nge-Intanethi kuyinto inqubo esheshayo futhi engabizi kakhulu. Sitshala imali ekukhangiseni futhi ngalesisisekelo sithola amaklayenti amasha. Bathola izikhangiso, sigcina imininingwane yabo, sibuyele kubo, bathenga umkhiqizo wethu.
Ukuqhuba imikhankaso yokukhangisa kwi-Inthanethi ku-Social Media.
I-ROI (buyisela kutshalomali, buyisela kutshalomali).
Ukukhangisa ngocingo (Izaziso).
Ukukhwabanisa ukukhula - Izindlela zokukhula eziphumelelayo kuphela zebhizinisi lakho
Ingabe unayo ibhizinisi elincane? - Ungibize ngingakusiza! (Ihlongoza inani elincanyana)
Ngizohlola ibhizinisi lakho + Jabulela amakhasimende amasha
Unayo ibhizinisi eliphakathi? - Sizoyihlakulela ndawonye! (Sizogxila ekunqobeni ukuncintisana + nge-imeyili Marketing +)
Unayo ibhizinisi elikhulu? - Usukho enhlanhleni, uzosusa okuningi!
(Sizoyithuthukisa emhlabeni wonke - phakathi kwabanye ngilwa e-Dubai, eLondon. I-India, i-Indonesia - Sisebenza kanzima izinsuku ezingu-24h - 7 kuLonto lonke.
Ngibheke, Ngena ku-Google: Inkampani ye-Dubai City
Futhi-ke uzobona ukuthi futhi yini engiyakhile ku-Linkedin, i-Facebook, i-Twitter kanye -Google.
Zijwayele nge-slides analysis slide kwi-intanethi nedatha ewusizo ekuhloleni kwami ​​nasekuthuthukiseni imisebenzi yamabhizinisi amakhasimende ami.
Kulungile, fika entweni eseyisisekelo. Usufikile kusayithi lami ngoba ungathanda ukufunda kancane ukuthi kanjani ukuqala ukuhlala esifundeni i-Gulf Region, ikakhulukazi e-United Arab Emirates.
Inkampani yami ibizwa ngeDubai City Company futhi bengilokhu ngenza imali enhle iminyaka eminingi futhi imali enhle kakhulu Emirates, I-Saudi Arabia kanye neQatar.
Eqinisweni, sithola imali yokusiza abanye abantu. Kungabonakala kuyinqaba kuwe, kepha uma ukwazi ukusiza abanye, uzofinyelela impumelelo empilweni.
Ukuqala inkampani yakho yokumaketha kufanele ukhumbule izinto ezimbalwa. Into yokuqala eyisisekelo okudingeka ugxile kuzo yisikhathi sakho sangasese, kunalokho kungabi khona.
Ngeshwa, ukumaketha ngokwakho kusho ukuthi akuyona umngane wakho. Thina abathengisi kwesinye isikhathi sisebenza ngezimvu isikhathi esingaphezu kwamahora we-18 Ngisebenze kaningi lapho Bengigula noma bengingasenawo amandla. Futhi ngokuqinisekile wena njengoMongameli wesikhathi esizayo wenkampani yezentengiso, ngeshwa, kuzofanela ukwenze umama engangiwenza Kuze kube manje ngenkathi kwakhiwa iDubai City Company.
Vele, inkampani yezentengiso inezikhathi zayo nezikhathi zayo eziphansi. Ungalindeli ukuthi kuzoba namakhokhethi ngonyaka wokuqala wenkampani yakho. Kungemva konyaka kuphela lapho uzobona khona le mali etholwe ephaketheni lakho.
Uzobona ukuthi inkampani yakho izoba ethandwa kakhulu ku-Google. Abantu abaningi bazosesha igama lakho futhi bafune amasevisi wakho kumanethiwekhi omphakathi nakuma media social.
Ngonyaka wesithathu wezwe lakho, ungalindela inzuzo, yithi, i-USD 10,000 ngenyanga. Ukuthi kubukeka sengathi yimali enhle impela, kodwa umsebenzi owubeka kule nkampani uma uyihlukanisa ngehora uzoba cishe i-2 USD ngehora. Lokho kungaphezulu noma kungaphansi kwenani lentengo lapho isuphamakethe isebenza khona eRomania.
Ngeshwa, awusoze wathembela ekusebenzeni imali enhle ihora elilodwa enkampanini yakho yezentengiso. Esikhundleni salokho, kufanele ulindele ukusebenza kanzima ngomholo ophansi ngempela. Ukuqala ibhizinisi, udinga kuphela ukusingathwa kwesizinda kanye nengcosana yamafutha ekhanda lakho.
Yiba ngumnikazi we-Boss onzima ukuphatha!
Ukumiswa kwebhizinisi lakho nokwakha umkhiqizo wakho kuyinto enzima. Ukuhlanganiswa okuyinhloko kwebhizinisi eliku-inthanethi ukuthi ungakwenza lokho okuthanda kakhulu nganoma yisiphi isikhathi. Awudingi ukusebenza emini ongasebenza ngalo ebusuku. Uma ukwazile ukubeka ibhizinisi lakho nge-Google, kunjalo, uzokwazi ukundiza izinkambo zaphesheya kwezilwandle.
Ukuvakashela umhlaba nokudlala ngokuzungezile kuyinzuzo nokuqapha. Ukuze wakhe inkampani kwi-intanethi kahle kakhulu, udinga phakathi kwe-5 neminyaka ye-10.
Amaqiniso anjalo ukuthi ungasebenzi unyaka ekhompyutheni bese zithengele i-900 nezimoto ezinhle, ngeshwa, kubuhlungu kakhulu ukuthi uzosebenza impilo yakho yonke futhi iziqalo ziyobe zinkulu ngeke ulale ubusuku, uzothenga ithephu eliseceleni elimbili ukuze unamathisele amashiya akho aphezulu ukuze uwavimbele futhi uwaphonse.
Ngakho-ke ngokweqiniso kungumsebenzi onzima kakhulu ukuwenza futhi lokho akwanele futhi inkampani yakho ngeke yanele ukwenza imali cishe. Ufuna ukuthola. Elinye iphuzu kuzoba isikhathi nethuba lokuthuthuka. Kufanele usebenze kanzima futhi kufanele uziphathe futhi-ke, zikhuthaze ngendlela enzima kakhulu.
Ngokwesibonelo, yinkampani yedolobha laseDubai. Sekuyisikhathi eside ngiyakha le nhlangano. Ngangiqale leli bhizinisi igama elihlukile kwakungukuthunyelwa kwe-CV kwamanye amazwe. Ngemuva kwalokho inkampani ishintsha igama nendlela njengokuqhubeka kwebhizinisi. Leli bhizinisi likhokhelwe iminyaka engu-10 yokugcina.
Ngakho-ke ungacabanga ukuthi kunzima kanjani ukuze uzisukumele futhi uzisebenzele nsuku zonke. Kunemiphumela emikhulu nesikhathi nomndeni wakho kanye nezindlu zemisebenzi okufanele uzilandele futhi kufanele uzenze ngokwakho ekuqaleni.
Ngiyazikhumbula eminyakeni edlule ngagcwalisa lelaptop yebhizinisi futhi kusukela ngaleso sikhathi ngiya phambili. Ngifuna ukwenza imali eningi kakhulu kunalokho engingakwazi nokuyicabanga. Vele, ngitshale izinkulungwane zezikhangiso eziphakathi kwe-facebook ne-Linkedin. Lokho, empeleni, kungenza ngibe unayo inkampani ezinzile eMakethe yaseDubai.
Ngakolunye uhlangothi nokuthi ibhizinisi elinjengebhizinisi lokuqasha kanye nokukhangisa, kuzosiza uzakhe isikhathi sakho nekusasa lakho. Ufuna ukwazi ukuthola izinto, Kwenziwe, isikhathi ofuna ukusithanda ngaso isikhathi. Omunye uzokuhlelela.
Ngakho-ke lokho kulungile futhi kubi ekwakheni ibhizinisi Online. Ngabe kufanele ukhumbule lawo ma-Arab Emirates akusiyo iMakethe elula ukwenza ibhizinisi ?. Ngakho ngaphambi kokuba uqale ibhizinisi lakho ngaso sonke isikhathi ungahle wenze amakhulu ayisishiyagalombili ubaba uyazi i-niche yakho futhi unesipiliyoni esanele sukuma bese uqala ibhizinisi lakho.
Sengisho nje, indlela esheshayo yokuqala ibhizinisi lakho ukuqala ezokuxhumana nabantu. Ungakhuthaza umkhiqizo wakho namuhla izithameli ezikhulu zamakhasimende noma abangani bakho. Bazokwenza umkhiqizo kanye namanye amakhasimende angahle abe nawo shaya inkampani yakho futhi ucele imininingwane eminingi.
Le ndlela esheshayo futhi ehlakaniphile yokwakha ikusasa futhi uyimpilo enhle. Njengoba ungakwazi ukulandela inkampani yami online uzobona ukuthi ingxenye yethu enkulu Facebook ne-Linkedin. Futhi ukusuka lapho empeleni sithola amakhasimende amahle kakhulu ukuthi sikwazi ukuqeqesha futhi sibasize bathole umsebenzi I-United Arab Emirates.
Ungakanani ongenza ku-intanethi?
ibhizinisi online ngokweqiniso akulona ibhizinisi elinenzuzo kakhulu. Kepha kuzokwenza ukuthi wenze cishe u- $ 5,000 ngenyanga uma ngabe usebenza amahora ayisishiyagalombili kuya kwayi-10 ngosuku. Ngakho-ke uma sithatha lokho futhi sizoqhathanisa lolu hlobo lwemali nomsebenzi ojwayelekile. Ngempela kungenye yezindlela ezinhle zika-Imani nokuhamba impilo enhle.
Ibhizinisi eliku-inthanethi njengebhizinisi lokuthengisa noma ibhizinisi lokuqasha akuyona indlela yokwenza izigidi zamadola uma ungaholi namuhla umbono omuhle wokusiza abantu ukuxazulula izinkinga zabo.
Le nkampani ikwazile ukwenza cishe amakhulu amadola njalo ngeviki. Bese ithuthe izinkulungwane zamadola njalo ngenyanga. Futhi-ke iba ibhizinisi elinenzuzo enkulu. Kuze kube manje futhi manje ibhizinisi leli lihamba kahle kahle futhi lowo akukho msebenzi omningi okufanele wenziwe nsuku zonke. Okumele kwenziwe njalo nje kuwukusebenzela amakhasimende ngenhlonipho futhi ukuzisiza zithole impumelelo yomuntu siqu neyokuqashwa.
Kubi kangakanani ukuqhuba inkampani yakhe yokuthengisa?
Isikhathi sakho esiningi, unkosikazi wakho ngeke aneliseke. Ukuqala kuzobe kungenacala, uzoyeka ukudla ibhulakufesi elibhalwe nge-15: 00 uzoba nokugeza futhi uzokwazi ukuthi awukayishiyi inja kusukela izolo. Ngemuva kwalokho isidlo sizoba se-18: 00 futhi sizoba uhhafu webhodi kodwa inja yakho izovumela ungashiyelwa ngaphandle igxathu elilandelayo alilali ebusuku, omakhelwane bazoyeka ukukutshela Sawubona futhi izingane zizokumemeza zikumgwaqo ukuthi uyiZombie.
Futhi ngokuqinisekile akukho khilimu izosiza noma yimaphi amandla owesifazane ngeke kusize nokuthi sithini. Cishe awunamfazi. Lapho oshade naye amthandayo ukubuza wena? Yini i-stinks endlini ngemuva kwemiyalezo ye-15 kumakhasimende.
Futhi usadinga ukukhipha i-imeyili ohlangothini lwakho lapho ekugcineni usubheke ngamehlo akho ukuyibona ekuqaleni kwephaseji ngoba ngeshwa usuvele unezinkinga ngamehlo futhi aqhamuka kwikhompyutha.
Ngokolunye uhlangothi, uqoqa imicabango yokuthenga ukuqala ngomhlaba obonakalayo uqala ukuzazi kancane ukuthi yimuphi umbuzo umkakho akucele kuwo ikhanda lakho liqala ukuqinisekisa ukuthi kungaba yini impendulo yokuqala.
Kungaba yimfucuza kusuka ngesonto ukuphendula amasokisi wesibili ngemuva kombhede futhi empeleni yonke indawo impendulo inombolo 3 Wena uyinja.
Isigaba ngasinye esilandelayo sizoba sibi kuphela, kepha isikhathi sizofika futhi ngeke kudingeke ulinde isikhathi eside lapho ubona ukuthi isimo se-akhawunti yakho siqala ukuhamba kancane, ngokumangazayo, akuyona imali ethunyelwe ivela kumama wakho, uqala ukubona incazelo yomsebenzi wakho ubone ukuthi ihleli ekhompyutheni kanti nokho ithela futhi inezithelo eziningi. Ngemuva kwesikhathi esithile ungawuboni umsebenzi wakho uyibona ifundela mina nawe ukuthi umkhiqizo wakho newebhusayithi yakho seziqala ukuthola isikhundla esingcono kakhulu kwizikhundla zikaGoogle.
Futhi ngokuqinisekile abantu bafuna wena bese abantu abafuna lokho okuphakamisa ukuthi kunabantu abaningi njengawe. Futhi bafana nawe angiqondile iZombie. Ngakho-ke, abantu abafuna umkhiqizo ongabanikeza noma abazowenzela wona futhi uzokwenza imali online ngebhizinisi lakho.
Futhi lesi yisikhathi lapho ekugcineni uvuka kule khompyutha. Uvuka ekhompyutheni, ukhulise izimpumputhe egumbini uzizwe sengathi imisebe yelanga ithinta ubuso bakho ngokungazelele futhi uyabona ukuthi bekufanele yonke imizuzu.
Unewebhusayithi enhle ngempela, ibhizinisi elinezikhundla ezinhle, futhi okubaluleke kakhulu ukuthi ungumphathi konke ukwenzile owadalela umkakho kuphela futhi akekho umuntu okwaziyo ukukuthatha, uzolahlekelwa ngisho nephepha, ulwazi lwakho lwamakhono usunayo kuzokuvumela ukuthi wakhe elinye ibhizinisi elikhulu.
Kungani i-Dubai i-So Great kakhulu ye-SEO Jobs?
IDubai yindawo enkulu kunazo zonke ezake zenziwa ngabantu ngomunye umuntu. Kungalesi sizathu inkampani yethu isiza laba bantu ukuthi bathole umsebenzi omusha ongabakhona e-United Arab Emirates.
Ithimba lethu kuze kube manje selisize izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke. Iningi sisebenza nabantu baseNdiya nabantu abakhuluma ulimi lwesi-Arabhu nolimi lwesiFarsi. Ngakho-ke uma uhlala e-Europe noma e-United Arab Emirates siyakwazi ukukusiza nokunikeza umsebenzi wakho esifundeni se-Gulf.
Idolobha laseDubai lihle indawo ngoba ungathola umsebenzi omangalisayo futhi ugqugquzelwe ngokushesha okukhulu. Elinye iphuzu elihle okuyindawo enhle kunazo zonke ukuze uthole imali wukuthi le ndawo yinhle ngempela yokuthola umdlalo womsebenzi ngokushesha kunenye indawo eGulf.
Lokho yinkulungwane yezinkampani kahle ungawuthola ngempela umsebenzi futhi uxhumane nabanye abantu. Ukwenza isibonelo ungajoyina iphrofayli yethu ye-LinkedIn futhi ngizobe ngifaka ikhasi lenkampani le-Facebook Ngokulandela iphrofayili yethu yenkampani ungaba thola okuthakazelwayo kwemisebenzi futhi uxhumane nabantu abaningi abafanayo abafuna umsebenzi njengawe.
Inkampani e Dubai
Le nkampani futhi iyi-brand Dubai enhle kwiwebhusayithi yabo ungaxhumana naye futhi uzoba hey hey 2 ubone ukuthi benzani empeleni ngokwemibandela yebhizinisi. Ukusebenzisana nalezi zinkampani zezimoto ku Dubai ubuso obuhlukile esifundeni se-Gulf izokunikeza indlela eyingqayizivele yohlobo lwakho lwakamuva lwentuthuko yokuthengisa okuphezulu noma yomnyango wobunjiniyela.
Inkampani ese-Atwell eseDubai idolobha. Lolu hlobo lwebhizinisi lomhlaba wonke elimhlophe. Ngaphezu kwalokho le nhlangano empeleni iqasha abantu emhlabeni jikelele. Ngakho-ke noma ngabe ukuphi empeleni uqhamuka usengathola umsebenzi nabo. Njengoba sonke sazi i-80% yabasebenzi ukuthi iqhamuka eNdiya nasePakistan. Lokhu kungenxa yokuthi akunandaba ukuthi ngabe empeleni uzama ukusuka eDubai. Usenethuba futhi sicela usebenze kwiwebhusayithi yabo. Ukuze uzokunika ubuciko obusha be-Haygood eDubai.
Lolu hlobo empeleni luhlobo olukhetheke kakhulu futhi iningi labasebenzi angikwazi ukuthola umsebenzi nabo. Kodwa-ke, uma unesipiliyoni esihle, nakanjani uzoba nokukhetha futhi uzokwazi ukuthola umsebenzi ngaleso sikhathi. Lezi zinkampani empeleni eziqasha abaphathi beziteshi zisebenza nabaqondisi abangochwepheshe kanye nama-CEO.
Ngakho-ke uma unesipiliyoni ungathola ithuba lokusebenza nezinkampani ezinjengalesi. Kukhona ukuxhumana okuhlinzekwe ngaphezulu futhi sicela ukhulume ngakho futhi khona-ke bazokuhambisa ngokuqhubekayo esigabeni somsebenzi. Ngiyethemba uzothola umsebenzi omangalisayo Amazwe ahlangene nale nkampani.
Inhlangano eyaziwayo. Ukubuyekezwa kwe-intanethi kuthanda nje kule nkampani. Ngakho-ke uzothola ithuba ngemikhiqizo ephezulu njengale. Ngokwejwayelekile, izinkampani zezimoto zihlala zinikeza amaholo abiza kakhulu abasebenzi bazo. Futhi ungahlala ulindele ngakolunye uhlangothi ukuqeqeshwa okuhle futhi ukubeka kahle ukuqeqeshwa kwayo.
Ngakho-ke ukuthola ithuluzi lethu elisha kuyiphuzu elihle kwabafuna umsebenzi kanye nabantu empeleni abafuna izindlela zokuxhumana. Ngokuvamile, uma kunjalo ngifuna ukuxhumana nabantu ngaphakathi Dubai. Sebenzisa ithuluzi lethu bese umeme isimemo kusuka kuhlu lwakho lwe-imeyili. Sakhe uhlelo olulula. Ngakho-ke konke okudingeka ukwenze empeleni yi-Gmail noma i-Hotmail. Bese kuthunyelwa ama-imeyili kusuka kuhlu lwakho lwe-imeyili.
Ngemuva kokuthi ushayele ihlombe okuncane kokuxhuma enkampanini yethu mema noma ngubani amathuluzi. Uzothumela ngokuzenzakalela isimemo sazi ukuthi uyinkampani yama-vice City. Ngakho abanye abantu ongababhalisela i-Dubai noma empeleni uhlala e-United Arab Emirates.
Kukhona amathuba amakhulu. Abanye abantu bangase ube nesifiso sokujoyina inkampani yedolobha laseDubai. Futhi konke okufanele ukwenze ukubanikeza nje ithuba lokukwenza ngendlela ye-Smart ngokusebenzisa izinsiza zethu zenkampani. Uma sithatha isibonelo se-4 umuntu ojwayelekile one-300 ufinyelela kubantu be-500. Umuntu uzo mema abangani bakhe kuwebhusayithi yethu. Ngemuva kwalokho kungakufanelekela ngempela ukujoyina iwebhusayithi yethu.
Noma kunjalo, indlela ehlakaniphe kunazo zonke yokuthola nokumema abangane bakho eDubai. Izokuya kuphrofayela ye-LinkedIn. Futhi-ke lokho kuyindlela elula yokuthumela amalungu akho e-BTS futhi bese umane uthumele isimemo kubo ngokunjalo. Ngakho-ke ngale ndlela ngeke uthole yakho kuphela kodwa futhi kusukela kwabezindaba zenhlalo. Lokho kuzokusiza nakanjani wakhe umkhiqizo wakho futhi uboniswe nakwezokuxhumana.
Inhloso yenkampani yedolobha laseDubai ukusiza abantu ukuthola i-gulf region. Ngakho-ke kukhulunywa njalo uma ufuna ukuxhumana nabantu abanentshisekelo I-United Arab Emirates, I-Saudi Arabia neKuwait. Inkampani yethu iyi-4 efanelekile izidingo zakho.
I-Nice-ever Vintage Leopard Ephrintiwe Umsebenzi we-vestidos Cold Beer ene-Bow Business Party bodycon Office Women dress B483
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 20 izilinganiso ikhasimende
I-Nice-ever Vintage Elegant Contrast Colour Patchwork egqokwa ukuSebenza ama-vestidos Business Party Office Office Women Bodycon Dress B463
I-5XL 6XL Autumn Plus size Plaid dress 2019 Ubusika Abesifazane Abajwayelekile Abasayizi Omkhulu Umsebenzi Wokugqoka Ihhovisi Ledenikazi I-4XL Ingubo enkulu yomzimba we-bodycon Party
Ithemba eliphilayo liyisihluthulelo sempumelelo. Ngokwethemba umema okuningi kakhulu enkampanini yethu futhi basize bathole umsebenzi ukwenza ukuxhumana okuthile kwezokuxhumana nabantu edolobheni laseDubai. Ngiyacela ungakhohlwa ukuhlanganyela futhi uthanda iposi lethu. Injalo-ke nale ndlela abangane bakho abazokwazi ngayo ukubona ukuthi wenzani online nokuthi unzima kangakanani izama ukufeza imisebenzi eDubai.
I-SEO kanye Work Ekukhameleni ibhizinisi lakho .. Ngiqale umsebenzi wami wokumaketha ngisemncane kakhulu. Eminyakeni engu-21 nengxenye yeminyaka, ngaqala ibhizinisi lami lokuqala online.
Uyazi ukuthi yayiyini inkampani yami yokuqala?
KwakunguLed Multimedia. Ngisungule inkampani ngoba angikwazanga fumsebenzi okhokha kakhulu ngalesi sikhathi. Nom, ngizamile ukuthola umsebenzi okhokhelwa kahle eYurophu naseMiddle East !.
Njengoba ungakwazi ukuqagela, kwehluleka, kwangempela kwangithola mina futhi ekugcineni ngafaka izimali ku-Led izikrini.
Sidinga izikrini ze-LED ukuze sidlale ukuhweba kuzikrini ezinkulu. Futhi kukhuthaza izinkampani ezinkulu eMakethe ... uhlu luqhubeka.
Ngabe ngilahlekelwa nge-250,000 USD
Kepha uma bekufanele ngiqale konke kusukela ekuqaleni, ucabanga ukuthi ngizokwenzenjani?
Ngaphambi kokuthi ngithole lokho, ake siqale sikhulume ngalokho engikutholile sekwephuzile ekumaketheni kwami umsebenzi eDubai…
Kwenzekani Ngifunda sekwephuze kakhulu emsebenzini wami? Indawo yokubeka iwebhusayithi ebizwa ngokuthi yi-SEO. Ngakho-ke ngizovuma ukuthi ngilungile entweni eyodwa futhi into eyodwa. Ekukhangiseni kwe-Intanethi
Manje ngiqondisa i-website traffic kumaklayenti ami.
Konke kuxhomeke embonini lapho isayithi litholakala khona, ngingakhanga ukuhamba kuyo futhi ngiyithande. Futhi ngaphezu kwakho konke, ngiyakwenza ngaphandle kokukhangisa.
Kepha ngoba ngingenza into eyodwa, akusho ukuthi ngikwazi ukudala ibhizinisi eliphumelelayo. Ngithole ngakho kwi2015. Ngisadinga abantu abamangalisayo abaseduze kwami.
Nokho, ngemuva kokuwa kokuqala kwenkampani yami yokuqala yezentengiso. Nginqume ukuba ngumphathi, Mina waya e-US.
Ngithole iposi yemenenja e-Ireland, ngibe sengithuthela eLondon. Kwenye yezinhlangano zezimali, ngathola uqeqesho lokumaketha.
Abantu abadale iDisneyland beza kithi. Ngifundile-ke kanjani ukwakha umkhiqizo wenkampani amazwe omhlaba.
Isibonelo, lapho ngiqala ukusebenzisana nabakhangisi baseDubai, mini yami ibhizinisi laqala ukukhula.
Ngabe ngathola nge-350,000 USD
Ukulandela lokhu kuhola, ngakha inkampani eku-inthanethi e Dubai. Noma kunjalo, bengingazi ukuthi ngingayithuthukisa kanjani ?. UJohn West weza nomqondo wokuthola abantu abanesifiso senkonzo yami.
Ngakha i-Dubai City Company ku-Linkedin
Ngaphatha futhi ngaqala ngokukhangisa nge-Intanethi. Kuhlale izinyanga ezingaba ngu-6. Futhi ngokumelene nenkambo yemvelo ye-matrix. Inkampani yami waqala ukuthola imali ethile.
Ngabe ngathola i-First Million USD yami
Ngenze imali eningi esikhathini esingaphezu konyaka. Yini ongayisebenzisa imali enjalo? izindawo zokudlela ezibizayo, izimoto zemidlalo, uhambo lwangaphandle, Ama-Quads nendawo eyimfihlo ku-SPA yomndeni.
Ngaba ngumphathi jikelele wengxenye yebhizinisi lezezimali, ngokuvamile akekho okunye engifuna ukukukwenza.
Abantu abacebile uma bengenayo isikhathi, bazothola othile ozokwenza.
Uyabona, abathengisi abaningi, abaphathi bebhizinisi abanalo imfundo futhi laba abajwayelekile abaphathi jikelele.
Iningi lazo lihle ngempela ekwakheni amaqembu aqinile nokuqasha abantu abalungile.
Futhi okuhle kunakho konke, bangakwenza ngesabelomali esilinganiselwe.
Lona ikhono lakhe elihle kakhulu!
Bengisebenza nabaphathi abaphezulu abavela eLondon naseDubai
Ukusebenza nabaphathi abakhulu kakhulu London, Dubai, New York. Ngaqaphela ngokushesha ukuthi kungakhathaliseki ukuthi uhlakaniphile kangakanani, awunakakha inkampani enkulu ngaphandle kokuthi ube neqembu elinethalente.
Vele, ungazitholela izigidi, akusiyona into enkulu ukukhangisa. Kodwa kunzima ukuthola, ukusho, amadola we-500,000, noma i-1,500,000 dirhams ngonyaka ngemali engenayo ngaphandle kweqembu elimangalisayo lokuthengisa nokumaketha.
Vele, abantu bazokusiza futhi uthuthukise ibhizinisi lakho ngokushesha. Isho obala, ngamandla amakhulu, ucabanga ukuthi ukhetha abantu abalungile, ukuxazulula izinkinga ngokushesha bese ubona imali engenayo.
Ngakho ngabe ngingenzenjani uma ngidinga ukuqala futhi?
Yebo, isifundo sempilo esingenhla singenye yezifundo ezinzima kunazo zonke okwadingeka ngizifunde. Futhi ngifunde sekwephuze kakhulu emsebenzini wami.
Ingabe kufanele ngikwenze ngineminyaka engu-18?
Kuyacaca, kepha uma uqala njengosomabhizinisi omncane kakhulu noma umdala, wenza amaphutha (ngesinye isikhathi amakhulu) ongeke ubenawo uma ungaqala uhambo lwakho lwebhizinisi kungekudala.
Hhayi, bengizosebenzisa i-9 yokuqala iminyaka yohambo lwami lwebhizinisi phakathi kwezinkampani ezikhulayo zokuthengisa.
Eminyakeni emithathu yokuqala, ngangichitha isikhathi sami ekuhlanganiseni kahle kwe-Enterpriseurship and Technology. Futhi kungcono ukuthi anginayo imali eningi eyengeziwe. Ngoba amaphrojekthi anjalo anzima futhi awaqali njengomkhumbi we-rocket.
Isizathu sokuthi ngingenakukhetha ibhizinisi elincane elikhula ngokushesha ukuthi ingxenye enzima kunazo zonke ukusebenza kwenkampani.
Ngenxa yesinyathelo esilandelayo ekukhuleni kwayo. Ukusebenza enkampanini enengcindezi emangalisayo ngenxa yamaphrojekthi wesikhathi noma ukungajabuli.
Awungeke uthande noma ulawule okuthile, okungalawulwa kuphela enkampanini ephakathi nendawo. Ifomu lokuqalisa liyafundisa wena ubuhlakani nokulwela ukunqoba.
Ukuqala ibhizinisi uzofunda impilo yebhizinisi.
Ngemuva kweminyaka yokuqala ye-3 ngisebenzise enkampanini encane, ngangizosebenzisa iminyaka emibili elandelayo ngisebenza enkampanini ephakathi e-US noma eLondon, ihola okungenani i-DH 10 million futhi ikhula njengephathi kuhulumeni ngemuva kokhetho.
Lokhu kuzokusiza uqonde ukuthi inkampani ekhula ngokushesha ibukeka kanjani. Ngakho-ke ake ube ngumdlali wokuqala. Kepha. nakanjani uzokutshela ukuthi ibhizinisi alikho kulungile, kungcolile kakhulu futhi kunzima.
Khona-ke kukhona i-canola yokucindezeleka
Izinto eziningi zihluleka, zikhulile ukuba zibe umphathi futhi udiliza ngoba ukhula ngokushesha ngezifiso. Amakhono adinga isikhathi nokulwa.
Vele, usengafunda izinto ezinjengezomnotho, noma ungasebenzela nabantu abanjengo abathengisa nabaphathi. Kepha lapha kufanele uqale wenze umsebenzi omningi.
Ngemuva kweminyaka elandelayo ye-2, kufanele usebenzise iminyaka ye-2 usebenza enkampanini ephakathi nendawo. Ngaphezulu noma ngaphansi, inkampani ekhiqiza okungenani imali eyizigidi eziyinkulungwane ngonyaka, kodwa ngaphansi kwesigidigidi se-Dirham.
Izinkampani eziPhakathi zihlukile kokuqalwa!
Amaphrojekthi abhekene nezinkampani eziphakathi nendawo zihlukile ezinkampanini ezincane nezinhlangano ezinkulu. Kepha ngokuba yingxube eyodwa yalezi zinkampani, iminyaka embalwa ufunda yonke into ekubhekaneni nazo ezombusazwe, kanjani ukwenza inkampani ehamba kancane ithuthukise, ngisho nokucabanga ngesithombe esikhulu.
Ngakho-ke izinkampani zikhulu kangakanani, ngokwesibonelo, iDubai neLondon zibheka izimakethe ezinkulu, ngoba bayazi ukuthi kulula kakhulu ukuba ngumnikazi we-10% womkhakha ofanele amanani amaningi izigidigidi zama-dirhams ngokwesibonelo e-UAE kunokuba ne-50% yezimboni ebiza izigidi eziningi zama-zlotys eYurophu.
Iminyaka edlule ye umsebenzi wami wobungcweti, Ngangihlala enkampanini enkulu njengeMenenja noma iPhini likaMongameli. Uma ngithi "inkampani enkulu", ngikhuluma ngenkampani ebiza ngaphezu kwe-10 billion Dirhams, Orlen, futhi okungcono kakhulu emakethe yomphakathi nasemakethe yamasheya.
Ngingenzenjani emva kweminyaka engu-10 yomsebenzi njengesisebenzi?
Injongo yonke yokusebenzela ezinye izinkampani noma abantu abahlakaniphe kakhulu ukuthola abeluleki abafanele futhi funda umhlaba webhizinisi langempela.
Ubusomabhizinisi abuphumeleli njengoba abantu abaningi becabanga. Impumelelo kulula ukuyifinyelela futhi kubukeka sengathi ungacabanga ngabaningi “abaphumelelayo” abanamandla ku-Instagram. Imvamisa kuyabonakala nakubona kumabonakude, bona zama ukuzithengisa emithonjeni yezokuxhumana noma kuthelevishini.
Iphuzu mayelana nomsebenzi wokumaketha
Ezamabhizinisi, inkampani uqobo kanye nezikhundla amawebhusayithi e-UAE abukeka emuhle futhi ayamangaza. Ngeke ngishintshe elinye iphupho.
Kodwa ngaphambi kokuthi uhambe ube usomabhizinisi, funda ezinkampanini zabo bonke osayizi.
Ukuba a CEO akuyona indlela elula, futhi into yokugcina ofuna ukuyenza ukwehluleka ngenxa yobuvila bakho ngoba idumela lakho konke onalo.
Ukusebenza ezimeni ezinzima iminyaka embalwa ezinkampanini zabanye abantu, wena izokwandisa amathuba akho noma iphumelele enkampanini yakho.
Futhi uma usulungele ukuphuma ngokwakho, ake sithembele!.
Kwakuyinketho enhle yokuqala nabanye abasunguli be co-co lapho usakha inkampani ngoba kuthatha isikhathi esiningi kanye nemali enkulu ukuyenza wedwa.
Ungenzenjani uma uqala kabusha?
Umsebenzi wokumaketha kanye ne-SEO
Shayela namhlanje futhi uhlele ukucaphuna kwamahhala sizokhuluma nge-Experience yakho!
Ake sikhulume ngebhizinisi lakho!
Ukuma kwamakhasi wedolobha laseDubai emakethe yendawo. Sithandwa sethu Abantu baseDubai bahlala edolobheni elithile. Kuhlukaniswe izingxenye ezimbili zezakhamizi. Indawo yokuqala yabahlali yiqembu elisebenza kumayunifomu e-Dubai, ngokwesibonelo emayunjini ezempi e-fire brigade kanye amaphoyisa.
Leli qembu lezenhlalakahle liphumelele ngokulinganisela ngakho kudingeka uhlole ukuthi umkhiqizo nokuthi ufuna ukubeka iwebhusayithi yakho.
Singumhlangano ohamba phambili wokukhangisa oyokusiza ukuthi uqonde ukuthi ukumaketha kwe-inthanethi kusebenza kanjani ku-Google. Ngeke ulizisole uma usinika ithuba futhi ushayele inombolo yocingo ngezansi.
Ukuthengisa Iwebhusayithi - Ngizokusiza ukukhuthaza iPositioning kanye ne-SEO in Dubai City
Inkampani yethu isebenza ngokubhekana nokufakwa kumawebhusayithi kuwo wonke ama-Gulf Region. IDubai ne-Abu Dhabi yidolobha elihle impela kithi ngoba sesihlale iminyaka eminingi lapha, Siyazi ukuthi kwenzekani otshanini.
Njengamanje, izinkampani eziningi eziningi ukuthuthuka emakethe ye-UAE, isibonelo, indawo yokuzivocavoca, imigoqo efanelekayo nezitolo zezingubo.
Futhi uma ungathanda ukushaya amakhasi okuqala eQatar naseKuwait. Umncintiswano ngeke ube mkhulu kakhulu futhi amathuba webhizinisi lakho azothuthuka ngokwanele lapho nje ungasinikeza ithuba lokubeka iwebhusayithi yakho ku-Top 10 Google.
IDubai yimakethe enhle kakhulu uma kukhulunywa ngamakhasimende. Amakhasimende ethu avame ukusibuza imininingwane yokuthi ungayibeka kanjani iwebhusayithi e-Abu Dhabi kumaki wasendaweni wase-Arabhu.
Ngoba imakethe ayikude nokuthi wonke umuntu uyazi ukuthi IDubai yidolobha elikhulu kunawo uma kukhulunywa ngentuthuko yezobuchwepheshe e-UAE.
Izinkampani ezinkulu kakhulu zinamahhovisi abo lapha, ngokwesibonelo, i-Orange neMicrosoft. Futhi ukuma umkhiqizo wakho ku-UAE yingxenye eyodwa esihlala sinikela ngayo kumakhasimende ethu.
Futhi ingxenye yesibili isiza ukukhuthaza imikhiqizo yabo emakethe yase-Dubai Arab. Inkampani yethu yathuthukisa ngempumelelo izinkampani ezingamakhulukhulu ngaphakathi Poland, I-US kanye Canada. Sasebenza futhi emakethe yamazwe omhlaba, kufaka phakathi iDubai, iNgilandi neLatin America.
Ukubeka isikhala Dubai Amasayithi - Nathi Uzoba ku-Top 10 Google!
Ukuma kwethu kuchungechunge lwamathuluzi sibonga iwebhusayithi yakho kulo IDubai izobonakala enjini yokusesha. Ngokusebenzisa inkampani yethu uzoba nensizakalo enziwe kahle yokubeka indawo kumawebhusayithi.
Ukube ubuzibuza ukuthi ingenza kanjani inkampani yakho ukuthi ibonakale kuPhezulu 10 kwaGoogle, cela ukuthi sibeke iwebhusayithi yakho. Inkampani yethu inendlunkulu yayo eDubai futhi inikezela ukuma okuhle kakhulu amawebhusayithi hhayi esifundeni se-Gulf kuphela kodwa nasePoland, i-United Kingdom kanye nakwamanye amazwe akude njenge-Indonesia.
Singakwenza kanjani i-SEO kuwe e-Dubai?
Inkampani yethu iyasebenzisa Izindlela eziphephile ezifakazelwe kuphela zokumiswa kweDubai. Sihlala sikuqinisekisa ngemiphumela ephezulu kanye nokusebenza kahle kakhulu kokubeka amabinzana amahle kakhulu ezinjini zokucinga ezifana ne-Yahoo, Bing ne-Google. Inkampani yethu izama nokusiza amakhasimende ayo ekuqhubekiseni imikhiqizo yawo ekuxhumaneni nomphakathi.
Ngokolunye uhlangothi, IDubai ithole ukukhanya okuluhlaza okwandayo kweMaxima, amaphrojekthi amasha amaklayenti amaningi. Uhlelo lwethu lwasekhaya lufaka i-cinema endaweni yethu entsha.
Sikumema ukuba uhlole inkampani yethu ku-Google. Vele ufake i-Dubai City Company bese ugijima kahle kakhulu ekubekeni kwamawebhusayithi.
Ngokwesibonelo, sasebenza kwizingosi ezinjalo i-Naukri Gulf njenge-Facebook noma i-LinkedIn ngisho ne-Twitter. I-Dubai City Company isize amakhulukhulu amaklayenti eduze kwakho nsuku zonke, athole imininingwane kanye nemiklamo emisha yokwakha amawebhusayithi eDubai.
Sizokwakha ibhizinisi elikhulu kuwe-intanethi!
Ithimba lethu lochwepheshe eMakethe Yezokunakekelwa KweDubai. Sizokwenzela ikhadi lebhizinisi leGoogle Map. Sizokwakha iwebhusayithi yakho ku-Facebook naku-Twitter. Sizokusiza ukuthumela iphakethe le-imeyili eliyisisekelo kumakhasimende akho asevele athenge umkhiqizo wakho.
Uma uthatha isinqumo sokubambisana nathi, sikunikeza uhla lwezisombululo ukuze weneliseke nokuthi inkampani yakho iqale ukuletha inzuzo nokuthi yini oyithatha njengomsebenzi onzima. Sihlala sinikela ngezixazululo zenkambiso kumakhasimende ethu, ngokwesibonelo, imikhankaso yokukhangisa ku-Facebook noma ngisho nokusiza ekutholeni abalandeli ku-Instagram.
Inkampani yethu yasungulwa eminyakeni eminingi edlule nguJohn West eDubai. Kusukela lapho, sinephothifoliyo ebanzi ngempela yezinkampani kanye nabalingani bethu ebhizinisi esisebenza nabo. Phakathi kokunye, eKrakow, Wroclaw nasePoznan.
Siyethemba ukuthi uzosinika ithuba lokukusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho lempi. Usithole kunenjini yokusesha ye-inthanethi ngakho ukucabanga kungasho ukuthi sinokwethenjelwa futhi sisebenza kanzima. Imisebenzi eDubai ihlala ithuthuka futhi ngaphezulu kwe-30% yezinkampani ezintsha zivula amahhovisi abo ngaphandle kwesifunda saseDubai.
Isikole Sokumaketha - Ungangithola ku-inthanethi!
IDubai yethu inebhizinisi elikhulu futhi namandla ezomnotho. Ngokusho kweGoogle ne-Facebook, phakathi nesonto, kufakwa abantu abangaphezu kwe-150,000 edolobheni njengabasebenzisi bezingosi zokuxhumana nabantu. Futhi, kufanele ucabange ngokulawula i-inthanethi ngaphambi kokuba enye inkampani ikwenzele. Ngakho-ke E-Dubai, kusenokwenzeka ukuthatha izintambo emakethe ngoba umncintiswano awubanzi kangako ngokwesibonelo esifundeni saseSharjah noma seDolobha. Yeminyaka engu-5 kuya kwe-10 selokhu wafunda lokhu blog. Kungenzeka kakhulu, izinkampani ezinikela ngemikhiqizo yazo zizobusa imakethe.
Nweba inkampani i-UAE nathi!
Ngakho-ke njengomuntu osomabhizinisi udinga inkampani ekhuthazwe kahle owaziyo ukwakha ibhizinisi online. E-Dubazini, imicimbi eminingi yezemidlalo namasiko idalwa ngaso sonke isikhathi.
Ngakho-ke hhayi kuphela okubizwa ngabantu bendawo futhi bazoba nentshisekelo ngomkhiqizo wakho. Kepha futhi nabantu abeza lapha bezolingana noma belwa isibhakela okwenzeka kakhulu ku UAE I-Arena.
Futhi, umbono wesikhathi kufanelekile impela ukuthatha inkunzi ngezimpondo futhi ufake izinkampani kwi-Intanethi eDubai. Inhloso enkulu inkampani yethu ezoyenza ukubeka wena njengenkampani ehamba phambili emakethe ye-UAE. E-Emirates kunezindawo eziningi ongafinyelela kuzo nge-Intanethi, isibonelo isikhungo sezemidlalo i-Arena Dubai. Ngemuva kwalokho, isiteshi sedolobha lapho kunesikhungo sokuxhumana esinamandla kakhulu ne-Historical Museum lapho kuvame khona abantu abasha ukuvakasha esikoleni.
Ukuma kwamaPhathi eDubai - Zinike ithuba lokuvela emhlabeni ongabonakala. Dlulisela ibhizinisi lakho ku-inthanethi bese uqala ukunqoba amakhasimende online. Khulisa ukuthengisa ukukhulisa inzuzo.
Nciphise ukulahlekelwa ku Dubai. Yiba umngane wethu webhizinisi e Dubai.
Ukumiswa kwekhasi lase-Dubai? - Ngenkampani yethu kuphela!
Singabantu inkampani enokwethenjelwa ongayethemba ngamaphesenti ayikhulu. Uma ufuna ukukhuluma nokuthola okwengeziwe noma ube nokulindelekile okukhethekile okufanele sikukwazi ngakho. I-Duba City City Company ikumema ukuba uxhumane nabamele abamele inkampani noma ngisho nomnikazi.
Sizophendula ngokuqinisekile yonke imibuzo yakho. Iqembu lethu le-SEO ne-Marketing izokusiza ukhethe isu lokumaketha elibanzi kakhulu noma eliyisisekelo lokuthuthuka kwenkampani yakho. UJohn West uzokweluleka ngokuthi Ungawathola kanjani amaklayenti ku-inthanethi. Siphonsa kancane ukukhangisa ku-inthanethi emakethe yase-United Arab Emirates, eDubai Online advertising advertising. Futhi ujabulele amakhasimende amasha.
Ngeke udumazeke ngokubambisana nathi. Singangeza kuphela kuwe ukuthi asibona ochwepheshe abasebasha be-IT, sonke sinemindeni futhi siyakwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi usebenze futhi uthembeke ekusebenzeni namakhasimende. Ngakho-ke uma ufuna ukuphathisa inkampani yakho izandla ezifanele, sikukhuthaza ukuthi ubambisane nabantu abangaphezu kwe-30 ngezizathu ezisobala.
SEO kusuka eqenjini lethu? Shayela namhlanje futhi uhlele ukucaphuna kwamahhala!
Iphathwe noJohn West - Ukumaketha kweGoogle - Siqala i-SEO ku-2009!
Ukuthengisa ku-Google! - Ibhulogi ye-Dubai City Company isandaqala. Ibhulogi yethu izoba ngokugcwele nge-SEO nakuMakethe we-Intanethi ku-Google nakuMidiya Yomphakathi. Kuzovumela abantu abathintekayo ekubekeni amawebhusayithi ngokushintshaniswa kwemibono nokucabangisisa mayelana ne-SEO.
Sikumema ukuthi ungeze amazwana, imibuzo kanye nezici. Sizobhala ngani mayelana nebhulogi yethu?
Cishe konke i-Dubai City Company isebenzelana ngaphakathi kweYurophu, London, Emirates ne-US Lokho konke kumakhasi wokubeka ku-Google. Ukukhokhela kwe-AdWords okukhokhelwe, kuguqulwa amakhasi kumamephu we-Google. Sizokhuluma kancane ngezindaba ezivela emhlabeni wezokuxhumana.
Sizozama ukukuchazela kancane imininingwane ngohlobo lwezinjini zokucinga ePoland futhi Ukuthengisa kusebenza kanjani kuGoogle.
Ochwepheshe bethu bazosebenzisa ulwazi olulula nezindlela ezivivinywe kahle kanye namathiphu okubeka amawebhusayithi endaweni, isibonelo, ukubeka iwebhusayithi eLegionowo? Futhi mayelana nolwazi olumayelana nokumaketha kwe-intanethi nokukhangisa kwe-inthanethi. Ngokufingqa - ngalokho esikuthanda kakhulu
Ngezansi uzothola ukuthi ungasebenzisa kanjani amathuluzi okwenza umsebenzi wokukhangisa nokuthi Ungakhuthaza kanjani ibhizinisi lakho ku-intanethi emakethe yasendaweni nakwamanye amazwe. Sizokunikeza ulwazi ngokuma kwamawebhusayithi. Futhi sithemba ukuthi uzoqonda ukuthi ukuthengiswa kwe-intanethi kusebenza kanjani nokuthi yiziphi amathuluzi okufanele usebenzise ukuze uqale ngempela i-adventure yakho ngokumaketha ku-Google.
Qala ukubeka iwebhusayithi!
Yakha ukumaketha kwakho umsebenzi e Dubai!
I-Google Marketing kufanele ihlukaniswe eminyangweni ehlukene ye-13. Kodwa ngaphambi kokuba sifinyelele kulokhu ngizokubhalela kancane ngalokho i-Google ikhona nokuthi iyiphi injini yokusesha ye-inthanethi. Ngakho-ke i-Google, naphezu kwemiqondo engalungile, yi-Search Engine yezihloko hhayi injini yokusesha ibhizinisi. Ukumaketha kwe-Google akuyona ukukhwabanisa kwezikhundla kwinjini yokusesha. Ngakho uma sikhuluma ngokuthengisa okuhlanzekile ku-Google, kukhuthaza okuqukethwe okulungile kulabo abathandayo. Futhi yilokho esikubiza ngokuthi ukumaketha kwe-Google.
Ukumaketha ku-Google kuhlaziywa kwedatha yomsebenzisi. Isibonelo, Indlela yokuhlaziya idatha bese usebenzise i-Google Analytics. Ukwandisa izikhundla zebhizinisi lakho le-intanethi. Umagazini olandelayo wezimakethe ku-Google ukuqoqa nokuhlaziya idatha yomsebenzisi ukuyibeka ibe ulwazi oluwusizo olungathinta ukuthuthukiswa kwebhizinisi lakho.
Cha. 1. I-Google Analytics nokuhlaziywa kwedatha
Uzwile ulwazi mayelana ne-Google Analytics ithuluzi elisetshenziselwa abathengisi ukuhlola ithrafikhi kusayithi lakho kusuka emithonjeni ehlukahlukene. I-Google inikeza ithuluzi lapho ungabheka inani labantu abakhona kuwebhusayithi yakho. Phakathi kwezinye izinto, isikhathi sangempela, ngakho-ke ungahlola ukubuka konke, indawo, imithombo yokuvakashelwa, okuqukethwe, imicimbi noma ukuguqulwa okuvela ekubekeni kwe-Google noma izikhangiso noma amanye amawebhusayithi.
Ukwengeza iwebhusayithi yakho ku-Google Analytics kufanele ube ne-Google Gmail. Ungayakha ngezansi nje uchofoze esithombeni.
Bese singena ngemvume ku-akhawunti yethu ye-Google Analytics bese sakha i-akhawunti entsha ukwengeza isayithi lethu.
Uma sakha i-akhawunti kuGoogle Analytics, bese uchofoza ukuphatha. Ukulanda ikhodi etholakala kuwebhusayithi yeGoogle Analytics bese uyixhuma kuwebhusayithi yethu. Lokhu kuzosisiza ukuthi sihlanganise futhi silandelele amakhasimende ethu ukuthola imininingwane ngokuhlala kwawo kuwebhusayithi yethu.
Futhi ngokusekelwe emiphumeleni esiyitholayo ku-Google Analytics, sikwazi ukubona uma iklayenti ithanda iwebhusayithi yethu noma nje ukubuka nokushiya. I-Google icabanga ukuthi ngokwesilinganiso ikhasimende kufanele lihlale cishe ngomzuzu noma ngaphezulu kwisayithi lethu ukuze injini yokusesha ikwazi ukuyibona njengamakhasimende abalulekile.
Okulandelayo, silanda ikhodi yokulandelela esizoyilanda kusuka ku-Google Analytics
Kulungile, ngakho-ke sinekhodi yeGoogle Analytics ezolandelela wonke umuntu ovakashele iwebhusayithi yethu. Manje sekuyisikhathi sokungeza le khodi kuwebhusayithi yakho. Iningi le-webmasters lisebenzisa i-WordPress njengengxenyekazi yokwakha iwebhusayithi. Kakhulu ngoba ivikelwe kahle kakhulu futhi ivuselelwa njalo.
Khumbula njalo ukumaketha ku-Google, futhi kuhlaziywa kwedatha kusuka kunjini yokusesha.
Ngakho, sichaza imenyu enkulu ye-WordPress. Engeza i-plugin entsha. Bese sifuna enye yama-plugin akhethiwe ngezansi.
Okuhle kakhulu: ideshibhodi ye-Google Analytics ye-WP nge-ExactMetrics (eyayisengaphambili i-GADWP)
Sifaka futhi sisebenzise i-plugin ku-wordpress
Siyakuhalalisela, i-plugin yakho kufanele manje isebenze ku-wordpress. Kusasa kufanele ukwazi ukulandela bonke abantu abavakashela iwebhusayithi yakho.
Ngenxa ye-Google Analytics, ungabheka ukuthi imaphi amakhasimende afika kuwebhusayithi yakho. Akudingeki ukuba abe yi-Google, futhi kungenzeka ukuthi avela kwezinye izinjini zokusesha noma ezivela emithonjeni eqondile, isibonelo kusuka ekukhangiseni kwe-imeyili noma othile wabhala igama lenkampani yabo engozini yokusesha futhi wangena ngokuqondile isixhumanisi.
Cha. Isu lebhizinisi le-2 elifanelwe ukunakwa kwe-Google
Ngakho uyakwazi ukulandelela ukuthi bangaki abantu abangena futhi bashiye iwebhusayithi yakho. Manje kufanele sikhethe isu elilungile lokumaketha yenkampani yakho. Ukuthembela kulokho okuthengisayo noma Yiziphi izinsizakalo ozinikezela kumakhasimende akho. Ungakhetha ekukhangiseni okuqondile, ukukhangisa okuku-intanethi, imidiya yezenhlalo noma i-athikili ekhuthaza ibhizinisi lakho kwamanye amawebhusayithi.
Isu elihle kakhulu lokumaketha eladalwa lilula kakhulu. Unomkhiqizo ongcono kunezinye izinkampani. Ngisho noma unezimakethe ezinhle kunazo zonke emhlabeni futhi umkhiqizo wakho uphephile kakhulu i-Google izokwazi. Kungani abantu bazosesha inkampani yakho, isibonelo ngokusekelwe emishweni. Ngithenge imoto enkampanini nokuthi ngiphinde ngiyibuyisele kanjani le nkampani kule nkampani. Izovele isayine injini yokusesha ukuthi kukhona okungalungile ngenkampani yakho.
Izimfihlo zika-Elon Muska: ukwakha u-Tesla, wagcizelela izingxenye ze-Mercedes CLS
Ngakho ngaphambi kokuba uqale ukuthuthukisa ibhizinisi lakho Cabanga ngokubaluleke kakhulu ngokuthuthukisa iwebhusayithi yakho noma imikhiqizo. Inkampani yami, okungukuthi i-Dubai City Company eminyakeni edlule, yawela eqinisweni yokuthi ayikwazanga ukuxazulula noma iyiphi inkinga futhi isetshenzisiwe kuphela nemali ekukhangiseni kwe-intanethi. Ngakho njengoba usola ekuqaleni, akuzange kunginike okuningi. Ukukhangisa okukhulu konke kuhle, kepha ngeshwa umkhiqizo ususelwe. Ngemva kwesikhathi esithile, inombolo iqalile ukufuna ezinye izinkampani zenjini yokusesha futhi lezo zinkampani zahamba phambili ku-Google.
Futhi, ukufingqa umkhiqizo we-Google kubaluleke kakhulu njengomkhiqizo osemakethe. Cabanga ngeGoogle kakhulu ngeStock Exchange. Ngabe inkampani izongena kwiWarsaw Stock Exchange esanda kuqala ukubambisana futhi ithuthukise lokho okubizwa ngokuthi ukuqalisa. Eqinisweni, izingqinamba yi-1-1000000. Vele, bekukhona izinkampani ezaziwa ukuthi zithandwa kakhulu ngoba sinomkhiqizo okhethekile onjengokuthi Uber kanye ne -boxbox. Vele, le nkampani yathola abatshalizimali bayo ngokushesha okukhulu futhi i-Google yanikeza elinye lamakhasi okuqala enjini yokucinga ngokushesha okukhulu.
Okuqukethwe kwe-Nr.3 kokuqukethwe ku-Google
Ukukhangisa kokuqukethwe ku-Google kubhala ngempela izihloko ezifanele kanye nokwaziswa kwamakhasimende angenzeka noma umuntu ovamile ovakashela iwebhusayithi yethu. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukumaketha kokuqukethwe kubhala amathekisthi ngokuvamile ngaphansi kwezinjini zokusesha ze-intanethi kamuva ezizobeka lo mbhalo ekhasini lokuqala. Yiqiniso, lokhu kungumqondo ongafanele ngoba awutholi lutho ngalokhu. Ngakho ukumaketha kokuqukethwe kudala okuqukethwe okungcono kakhulu nokuqukethwe esihlokweni esinikeziwe.
Isibonelo, lokhu kuchaza ulwazi futhi uhlolisise isihloko esingakaze senziwe ngaphambili kunoma yiliphi injini yokusesha ye-intanethi noma nanoma iyiphi enye iwebhusayithi. Ngakho ukumaketha kokuqukethwe kufanele kube umbhalo oyingqayizivele owawubhala ngomuntu noma inkampani yakho ingeziwe ku-intanethi futhi akukaze kube khona ushintsho ngaphambili. Ngokuvamile, ukumaketha kokuqukethwe kusetshenziselwa izinhlangano ze-forbes kanye nemithombo yezokuxhumana.
Njengamanje, ukumaketha kokuqukethwe kulawulwa yi-intelligence yokufakelwa. Yikuphi okuhlola cishe yonke imibhalo futhi engabizi ukufunda nokuyiqonda ezingeni lokusebenza komuntu nokuqonda. Futhi, noma ngabe ungathanda ukwakha iwebhusayithi yakho engenakho okuqukethwe okuhle Futhi ethandwa kakhulu ukuthi cishe akunakwenzeka.
Ekukhangiseni kwe-intanethi isitatimende esifana nokuqukethwe iNkosi ivame ukusetshenziswa. Ngakho-ke ngesiPoland, okuqukethwe kubusa ku-intanethi. Izinkampanini ezihamba phambili ezinezinkhundla eziphezulu kakhulu cishe okuqukethwe okungcono kakhulu kulabo abamukeliyo. Lokhu okuqukethwe kuhlelwe kahle futhi kwamukelwa kahle ngabamukeli futhi kuhlale kunendaba lapho isivakashi esingaba khona sewebhusayithi engiyifunayo.
Izinhlobo zamathekisthi ekukhangiseni kokuqukethwe Ngokusho kwe-Wikipedia
I-Wikipedia lapha ibonisa kahle Okufanele kube ukukhangiswa kokuqukethwe kwi-intanethi nokuthi yini okumele ibuke ngaphansi kwe-pinecone esiye yayihlakulela lesi sihloko Bona ukuthi yini okufanele uyigxilise ngaphambi kokuba uqale ukubhala izihloko nolwazi kwi-intanethi.
Amabhulogu wezinhlangano - kufanele abe yingxenye eqinile yewebhusayithi noma asebenze ngaphansi kwekheli elizimele isib. I-wordpress poland. Lezi blogs zivame ukubuyekezwa futhi ngezinye izikhathi izingxenye zombhalo zivame ukuxoshwa ngaphandle kwe-inthanethi. Ngenxa yokuthi ulwazi oluphelelwe yisikhathi nezinkampani ezinkulu zilalela okuqukethwe abakushicilelayo.
Amabhulogi we-Peronal - Lena incazelo yezenzakalo ezenzeka empilweni yakho, isibonelo, uhambo oluya phesheya noma ukubuka noma imicabango yakho. Futhi ababhulogi abaningi, ngokwesibonelo, benza amavidiyo abo ku-YouTube futhi bangeza kule bhulogi.
Ama-Tutorials e-inthanethi - okuqukethwe okuhlobene kakhulu nemikhiqizo, amasevisi kanye nezinsizakalo ze-intanethi ezinikezwayo. Iseluleko esivame ukuthenga abathengi ku-Allegro noma ku-OlX. Ngakho lawa ulwazi oluqondile kakhulu ongalunika abamukeli bakho, isibonelo ngokupheka noma ukulungisa imoto. Zibeka kahle okuqukethwe ngoba ziletha ukwaziswa okuthakazelisayo futhi zichaza ngokuningiliziwe ukuthi umbhali ufuna ukugxila kuphi.
Okuqukethwe okubhalwa ochwepheshe - izihloko ezibhalwe abantu abaye embonini iminyaka eminingi. Lokhu okuqukethwe kubhekisela kolwazi oluthembekile kuphela nolwazi oluhlolwe futhi oluvame ukuxhunyaniswa nokuqukethwe okuthembekile nokuqinisekisiwe. Isibonelo, amasayithi olwazi lukahulumeni noma amakhemishana angaphandle. Lezi zivame kakhulu ulwazi oluvele luchaza isihloko esinikeziwe. Kodwa-ke, bazama ukuchaza lesi sihloko ngokujula futhi ezimweni eziningi kuchazwe ochwepheshe ensimini enikeziwe ngezinkomba ezithembekile.
Izingxoxo ze-intanethi - Ngokuvamile, lezi zikhuthazwa okuqukethwe kwi-intanethi. Okuningi kwalokhu kubalulekile uma kuziwa ezinkampanini ezikhuthaza umkhiqizo wazo. Ngokuvamile, isibonelo, uKim Kardashian ungummeli wezinhlamvu noma, ngokwesibonelo, i-redbull isebenzisa izinkanyezi zezemidlalo ukuthuthukisa umkhiqizo. Ukunikezwa komkhiqizo engxoxweni Abantu abadumile nabasaziwa, isib. Ukuxoxisana nomongameli we-Microsoft noma i-Apple eshicilelwe kumagazini wemboni.
I-Podcasts ye-intanethi - I-podcasts ayinabo okuqukethwe kokukhangiswa okulotshiwe. Kodwa-ke, izinjini ezivame kakhulu ukucwaninga ama-podcasts ezenziwa ngabantu abazi kahle kakhulu embonini, isibonelo, wenatutu noma umuntu we-TV. Noma kunjalo, i-podcast ingasayinwa futhi ngokuvamile abantu abathumela i-podcasts kuwebhu bengeze ukuhumusha ngezilimi eziningi, ngakho-ke lokhu kuyingxenye yokukhangiswa okulotshiwe.
Ukubuyekeza ku-intanethi - okuphumelela kakhulu ku-Google. Uma zenziwe ngabantu abathembekile futhi ziyahlolwa. Isibonelo, ngama-blogger. Ngokuvamile, ngeshwa, lokhu akulona ulwazi lweqiniso. Ngoba izinkampani eziningi zisebenzise ukufaka ulwazi olungelona iqiniso mayelana nenkampani. Lokhu ngeshwa sonke isikhathi esitholakala kuyi-intanethi. Udinga ukukhokha ngokukhethekile uma kuziwa egunyeni lendaba esinikeziwe noma i-podcast enikeziwe ku-intanethi. Yiqiniso, izinkampani ezinkulu ezinjengeBusiness insider Polska. Ibhange lasePoland ngeke liziveze ekubhekiseni okukhohlisayo. Ngakho-ke kudingekile ukuhlola ukuthi ubani owabhala noma owusayine.
Izincazelo zemikhiqizo - imibhalo nolwazi mayelana nemikhiqizo, isib. Ezitolo ze-intanethi. Ezimweni eziningi, zihambisana nemigomo kanye nezici ezibekwe ohlwini ekhadini lomkhiqizo, okuyisici semikhiqizo efana ne-WooCommerce Poland.
Ukubuyekezwa kumamephu we-Google - Okwamanje i-Google idale i-Google Bhizinisi Lami ePoland. Ngenxa yalesi thuluzi, sikwazi ukuhlola amabhizinisi namabhizinisi amancane emakethe yasendaweni. Siyakwazi ukufunda kancane ngabo futhi lokho abasebenzisi bangempela benjini yokusesha nge-intanethi basho ngenkampani enikeziwe. Ithuluzi lokuthuthukisa ukumaketha ngokushesha ePoland.
Cha. 4. Ukukhangisa kwi-intanethi
Ngakho-ke abantu abaningi bacabanga ukuthi ukukhangisa kwi-intanethi kuphela ku-AdWords. Yiqiniso, lokhu kuyiphutha ngoba ukukhangisa ku-inthanethi umqondo obanzi kakhulu wokuthuthukisa imikhiqizo.
Izikhangiso zingahlukaniswa cishe ngezigaba ezimbili. Owokuqala kuzoba isikhangiso samahhala. Kulesi sigaba, isibonelo, sicabanga ngebhulogi lomuntu. Isibonelo, i-blogger yenza i-movie ku-YouTube futhi yabhala isihloko mayelana nomkhiqizo onawo.
Kamuva, wanezela lokhu kuwebhusayithi futhi wanezela isixhumanisi sakho futhi uthola ukukhangisa mahhala kumshini. Ngokuvamile, ukukhangisa kwamahhala nakho ulwazi olusuka kuwebhusayithi yomuntu mayelana nenkampani yakho. Futhi iningi lawo alikhokhelwe ngenxa yenkampani, isibonelo, enikeza amabhayisikili athengiswayo. Futhi inkampani yakho inikeza izingxenye zalezi zithombe zebhayisikili.
Uzokwengeza ulwazi mayelana nenkampani yakho lapho ungathola khona izingxenye ezithintekayo zebhayisikili zabo yisimemezelo samahhala esivela kwiwebhusayithi ekuqondeni kwenkampani yakho.
Ingxenye yesibili yesikhangiso ingabizwa ngokuthi ikhangelwe ukukhokhelwa. Lezi zikhangiso ezinye izinkampani ezihlinzeka ngemakethe ukuze bakwazi ukukhuthaza imikhiqizo kumakhasimende abo. Isibonelo, i-Facebook ikhuthaza ukuthunyelwe kwe-OLX ikunika ithuba lokuzama amabhanki akho amasevisi. I-Linkedin idala izikhangiso eziqondile ezingathunyelwa eqenjini elinikeziwe lamakhasimende anesithakazelo kulo mkhiqizo. Isibonelo, i-Twitter yenza izikhangisi zesifunda esinikeziwe, isibonelo eNdiya noma eMelika. Izikhangisi ezikhokhelwayo zihluke kakhulu ukuthi bangaki abantu abathola ulwazi mayelana nenkampani yakho. Isibonelo, okuthiwa yi-pop-up noma i-manual-manual. Bonke labo abathola ulwazi mayelana nomkhiqizo wakho noma inkampani yakho futhi ukhokha kwenye inkampani ekukhuthazeni umkhiqizo wakho nokwabelana ngolwazi mayelana nomkhiqizo wakho kubizwa ngokuthi ukukhangiswa okukhokhelwayo kwi-intanethi.
Ngakho-ke ekuphetheni, kufanelekile ukutshala imali ekukhangiseni okukhokhelwe? Kuncike ekutheni umkhiqizo owathengisayo nokuthi iyiphi intengo oyiphakamisela kulo mkhiqizo. Udaba olulandelayo luyilo mncintiswano uma futhi likhuthaza umkhiqizo ofanayo kule makethe njengoba wena nokuthi ukhulu kangakanani futhi kukhona ukuncintisana. Ngoba ngezinye izikhathi ikhokhelwe ukukhangisa futhi unganikeli imiphumela emikhulu uma ukukhwabanisa kuyizinkampani ezinkulu ngempela. Kulesi simo, singancoma ukuthi utshale kwezinye iziteshi zokumaketha, isibonelo i-Facebook noma ukumaketha kwe-imeyili. Ngoba uma inkampani enikeziwe inikeza imali, tshela, ngaphezu kwe-PLN 100,000 ku-AdWords, futhi njalo ngenyanga ukuthi isayithi labo lithandwa kakhulu futhi umkhiqizo wakho uzohamba ngezansi kunoma yiziphi izindinganiso. Ngeshwa, noma ngabe umkhiqizo wakho uphakeme kakhulu, amakhasimende kufanele abone ukuthi yini eniyinikezayo. Futhi emakethe okuncintisana kakhulu, ngeshwa, kunzima kakhulu.
I-Nr.5. I-E-commerce kwi-Intanethi
Ithuluzi lokuthengisa le-E-commerce ukufinyelela ikhasimende. Noma kunjalo, ezandleni zomphathi wemakethe omuhle kakhulu, ingasetshenziswa njengesikhumbuzo somkhiqizo wakho. Ukuhwebelana nge-E-commerce kunamathuluzi amanengi kakhulu wokumaketha, isibonelo, ukukhishwa kwekhadi - okungukuthi, uma ikhasimende lingena kuwebhusayithi yakho futhi lengeza into enqoleni. Le ecommerce ingasetshenziswa njengesistimu yokukhishwa kwamahhala esitolo sakho se-intanethi. Ngakho-ke, ikhasimende lingena engingezayo futhi ngiphume ngemuva kwesikhathi esithile ithola i-imeyili yokubuyisa ngomkhiqizo ayesezile kakade futhi konke okumele ukwenze kuyakhokha.
Lena isimiso esihle kakhulu sokumaketha esisebenza cishe ku-90% kuwo wonke amakethe. E-commerce kanye nezakhiwo eziningi ezithakazelisayo ezingasetshenziswa enkampanini encane. Isibonelo, ungeze ohlwini lokuthenga noma udala uhlu olusha lokuthenga ongayisebenzisa kamuva. Abantu abaningi benza kahle kakhulu ngoba, njengoba wonke umuntu uyazi, usuku luba namahora angu-24 kuphela. Futhi kunemisebenzi eminingi ngakho abantu abaningi badinga ngempela izikhumbuzo mayelana nomkhiqizo wakho noma ngabe ufuna ukuthenga okuthile futhi othile umbiza ngokuthi isibonelo uma uthenga umkhiqizo wakho. Kuyafaneleka ukuthumela kusuka emshinini ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ngolwazi ngesihloko Sawubona, ungathanda ukuthenga umkhiqizo okhohliwe ukwengeza inkokhelo Ukamenywa ngomlomo ukuthenga esikhathini esizayo.
Futhi kuyindlela yokuthengisa okuhle, kodwa akuyona indlela yokuthengisa okuqondile. Ngakho ngaphambi kokuba uthole iklayenti kusuka ku-intanethi bese umkhumbuza ukuthi sikhona. Ngokuvamile, izinkampani eziningi zisebenzisa izikhumbuzi ezinjalo, isibonelo, pracuj.pl.
Cha..6. Ukumaketha nge-imeyili
Lokhu kuseyindlela ephumelela kakhulu yokumaketha kwe-intanethi eyadalwa ku-intanethi. Abantu abaningi bacabanga ukuthi akukho ukumaketha okungekho ngempela, abantu abafundi ama-imeyili kusuka ezikhangisweni nokunye okunye. Ngeshwa, siyihlolile izikhathi eziningi futhi sonke singasho njengabadayisi abasebenza ezimakethe ePoland ukuthi i-imeyili yokuthengisa isabelana nanye. Kujabule kanjani ?. Abantu abaningi abanaso isikhathi sokuhlola ulwazi kwi-intanethi, bukela i-TV noma uhlale nezingane. Futhi ngokuzumayo, ngithola ulwazi nge-e-mail engitshela ukuthi isiphi isipho esifikile.
Indlela yokudala i-Newsletter usebenzisa i-Mailchimp?
Bheka inthanethi Indlela yokudala imikhankaso yokukhangisa nge-imeyili. Uhlelo olungcono kakhulu, yi-mailchimp ethumela imakethe ye-imeyili kahle futhi amaklayenti athola ama-e-mail kulolu hlelo njalo afika ebhokisini leposi ukuze angabi spam, simema ukuthi ubone lolu hlelo bese ulungisa ibhokisi lakho lokungenayo le-imeyli. Le nkampani, ngokuqinisekile, inikeza ukuthumela mahhala ama-imeyili ayizinkulungwane ezimbili ngenyanga.
Inani lakwaKowalski lingena kwiwebsite ngokuchofoza isikhangiso efonini. Futhi uma ngaphambili kwakulewebhusayithi eyayikhangisa ngendlela yokuthengisa i-imeyili. Kusuka kumishini, inkampani eyithumele iyazi ukuthi ikhasimende cishe linesithakazelo kumkhiqizo le nkampani inikeza yona. Ngakho ikhasimende lizofika okokuqala, ngeke lithenge kancane, kodwa lizoba nomkhiqizo wami. Ngemva kwesikhathi esithile, uzothola i-e-mail futhi, isibonelo ngesaphulelo se-20%. Ngakho ngizocabanga ngakho. Umkhiqizo omuhle ngibone izikhathi ezimbalwa manje ngithole i-diskant ekhokhela ukuthenga engiyifakayo, ngithenga ibhizinisi elibhekwe.
Yile ndlela ukuthengisa nge-imeyili kusebenza ngayo. Kuyinto ithuluzi elihle kakhulu lokuthengisa eliye ladalwa ochwepheshe be-IT. Ngenxa yokuthi angiphazamisi empilweni yomuntu futhi umamukeli wethu othenga umkhiqizo kithi akudingeki angene iwebhusayithi noma afunde ulwazi. Kuphela kumshini uthola i-imeyili mayelana nesipho esisha esivela kumkhiqizo wethu noma esitolo se-intanethi. Umshini uyenezela ebhasikisini umkhiqizo esamthumelele ngeposi. Futhi ake sithi imizuzwana eyishumi nanhlanu kusukela i-imeyili izokuthenga umkhiqizo esizokuthumela wona.
Ngokufingqa, ukumaketha nge-imeyili kuhluke ekukhangiseni kokuqukethwe ukuthi ungabuyela kumakhasimende izikhathi eziningi. Isibonelo, sinomkhiqizo esifuna ukuthengisa ngokuhamba kwesikhathi, sinomkhiqizo owodwa othuthukisiwe esinawo ekunikezeni kwethu. Futhi sibuyele kulesi siklayenti kaningi lokho okumsiza ngempela ukuthi aqonde ukuthi inkampani yethu inikeza ini. Yebo, njengoba wazi. Uma ikhasimende libona okwesibili ngesikhathi sesithathu. Kuzoba nesithakazelo kulo mkhiqizo kunokuba kuqala okokufika lapho ufunda ngewebsite yethu. Ngokuvamile ungayibona kwiwebhusayithi ye-Adidas noma ye-Nike.
Ukukhangiswa Kwendawo Nr.6
Ukuze wenze ukumaketha kwangakini udinga ngempela ukwazi ukuthi ungeza iwebhusayithi yakho. Ngezansi uzothola amawebhusayithi e-30 lapho ungangezela khona ibhizinisi lakho mahhala uphakamise izikhundla zakho emakethe yasendaweni e-Dubai. Yiqiniso, amanye alawa mawebhusayithi angamaqembu angaphandle kodwa ungakwazi ukuqondisa amehlo e-Google ukuthi ungeze ibhizinisi lakho kumawebhusayithi angaphandle. Kodwa wena uyinkampani ezuza amakhasimende e-UAE futhi uthanda nje ukuthuthukisa ibhizinisi lakho kule website ngaphansi kwesiqubulo se-carpet yokuhlanza e-Gulf esifundeni sase-Dubai.
Uma usuvele udala imephu ye-Google. Kungumqondo omuhle ukubeka indawo yakho ekusesheni kwe-Google kamuva. Ngeshwa, njenganoma yimuphi omunye umsebenzi wokubeka amawebhusayithi, kuthatha isikhathi esiningi.
Zibone ngokwakho kusixhumanisi Ngezansi awukwazi nje ukubeka iwebhusayithi yakho siqu kodwa futhi wengeze imephu yakho ukuze uzibeke wena endaweni yangakini. Isibonelo, ngezansi, njengoba ubona, sengeze izixhumanisi lapho ungafaka khona kuphela iwebhusayithi yakho kodwa futhi wengeze imephu ngewebhusayithi yakho ezobe ihamba phambili ezindaweni eziphezulu ze-Intanethi.
Futhi, njengoba ubona, ukumaketha kwe-Google kungenziwa ngezindlela eziningi. Ngokungeza inkampani yakho kumawebhusayithi njengeWirtualna Polska noma i-Onet. Buza ababhulogi ukuthi bangene isixhumanisi kuwebhusayithi yakho nomama wakho ozokwandisa indawo noma afinyelele ibhizinisi lakho. Konke lokhu kuyi-Google ngempela yokumaketha.
Ukukhangisa kwe-Nr.6 ku-Google namadivayisi weselula
Amadivayisi eselula kanye nokumaketha ngocingo empeleni kuyisihloko esinzima. Ngoba ukuze uthuthukise ibhizinisi lakho kothile okukuwe umakhala ekhukhwini, kufanele ugxile ezintweni eziningi.
Kumele sikhumbule ukuthi asikwazi ukuwedlulisa ngezikhangiso ngoba amafoni abasebenzisi bethu Ngeshwa, abanaso izikrini ezinkulu-ezinkulu. Ngakho singakwazi ngempela ukungeza eyodwa noma ezimbili izikhangiso ezizovela futhi ingxenye A lezi okuthiwa pop-ups. Isibonelo, inkampani yethu isebenzisa ithuluzi elihlukile le-Patel. Yilokho ngempela ithuluzi elikhulu lokukhumbuza amakhasimende ngebhizinisi lakho.
Abhalisile kuyithuluzi elihle lokukhumbuza amaklayenti akho ngebhizinisi lakho. Ungabathumela ulwazi olubizwa ngokuthi izaziso zocingo ngqo efonini yabo noma kunini. Eqinisweni, kungakapheli imizuzwana embalwa ngikwazi ukufinyelela amakhasimende amaningi asevele avakashela iwebhusayithi yakho kodwa ungakhunjuzwa nganoma yisiphi isikhathi.
Konke okumele ukwenze ungena ngemvume kwiwebhusayithi ukuthumela mina kumshini uthumela ulwazi kubo efonini yabo nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Sincoma ngempela ukufaka lolu hlelo lokusebenza kuwebhusayithi yakho ngoba nakanjani kuzokusiza ukwandise le traffic kule website. Amaklayenti akho ngeke abuyele kuwebhusayithi kuphela kodwa futhi athole ulwazi mayelana nomkhiqizo wakho omusha oyithandayo futhi angathanda ukwabelana okuthile okusha mayelana nenkampani yethu nganoma isiphi isikhathi lapho ukwazi ukuxhumana ngokuqondile ngokudlulisela zonke ezinye iziteshi zokumaketha.
I-Nr7 SEM - Ukukhetha amagama angukhiye
EACTIVE Wabhala umhlahlandlela omuhle kakhulu ngale ndaba. Lapha kuchazwa ngokucacile yonke into nokuthi ihluke kanjani ku-SEO nokuthi ungayisebenzisa kanjani leli thuluzi.
Ngakolunye uhlangothi, singathanda ukwengeza imininingwane embalwa mayelana nokuthi sifuna kanjani amagama angukhiye okuthiwa. Uma kuziwa ezikhundleni ku-Google. Kumele sikhumbule njalo ukuthi okubaluleke kakhulu umncintiswano esilwa nawo. Uma siyibhizinisi elisha, asikho ngempela kwi-intanethi, kufanele sicabange nokuthi izinkampani eziye zisebenza emakethe iminyaka eminingi, ngeshwa, ziyasidlula.
Ngakho-ke ukuthi ungabheka kanjani ngempela ukuthi sinethuba lokuba khona ku-intanethi nhlobo. Ithuluzi elihle lokuhlola imishwana eyinhloko esingathanda ukuyivela engxenyeni yokusesha yewebhu okwamanje i-Ubersuggest eyakhiwe ngu-Neil Patel. Eqinisweni, nguye oqala ukuthengiswa kwe-intanethi. Wakha isistimu yokubeka iwebhusayithi eMelika ngamabhizinisi amakhulu kakhulu. Uphinde wabambisana nezinkampani ezinkulu ezifana ne-Yahoo ne-Google. Kanti futhi i-keyword search keyword eyenziwe kahle kwi-intanethi.
Ubersuggest ngu-Neil Patel
Sicela ukhumbule ukukhetha iPoland uma usesha imishwana eyinhloko. Indlela elula ukubhala inkulumo yegama elingukhiye osola ukuthi amakhasimende afuna ezinye izinkampani kwi-intanethi. Ngemuva kokukhethwa, bheka ukuthi ukuncintisana okunzima kwesigatshana esinikeziwe kuzoba kanjani ngesikhathi sokubeka iwebhusayithi yakho. Yiqiniso, futhi kulolu hlelo ungabona abancintisana nabo nezinkampani ozolwela nabo isikhundla esiphakeme ku-Google.
I-KWFinder - I-Professional search injini yamagama abalulekile
Ithuluzi elilandelayo ongalisebenzisa liyi-KWFinder. Kuyinto futhi ithuluzi elisiza ngempela umdayisi ukuba abuke umncintiswano futhi afune imisho ephakeme kakhulu. Ngokomuntu, sihlolwe kokubili izinhlelo. Futhi bobabili basebenze kahle kakhulu uma kuziwa ezihumulweni eziyisisekelo. Kodwa-ke, uma ufuna imishwana ehambile kakhulu, okuthiwa amagama angukhiye amakhulu. I-KWFinder ibonakala ithuluzi elingcono lokubheka ibinzana elifanele ongathanda ukuliqala ekuhambeni kwakho nohambo lwe-SEO.
Ngakho uma ufuna ukuqala ukumaketha ku-Google, udinga ukuqonda amathuluzi amabili ezingeni eliphezulu kakhulu,
I-Nr.8 SEO - Imiphumela yosesho yamahhala
Manje yisikhathi lapho wonke umuntu ofunda lesi sihloko angathanda ukungitshela lokhu kukhiye wamagilisi okuzomsiza ukuthi agxume emakhasini okuqala we-Google. Lokho kuyisihluthulelo okudingeka ukwazi, akusona umbhalo omude kakhulu. Bheka ngisho nasesihlokweni sethu esivele sibhaliwe ngalesi sihloko wena ngokuzenzakalelayo upheqa uphinde upheqa. Yingakho i-robots ye-Google izofika esihlokweni sethu futhi ibone ukuthi inenani elifanele lemisho ebalulekile esingathanda ukuyibeka yona. Isibonelo, salesi sihloko sasebenzisa inkulumo yokukhangisa ku-Google. Lokhu akuyona imisho eyasinika inani elimangalisayo lamakhasimende kwisiphequluli se-inthanethi. Kodwa iningi kudingeka likhumbule ukuthi abafundi bangamakhasimende ethu futhi sibhala kubo.
Inkampani yethu ayibhale phansi izihloko ngaphansi kwe-Google. Sizama njalo ukubhala izihloko ezifanele ukufundwa kanye neminye imiyalelo. Isibonelo, phakathi novivinyo esenza e-Dubai. Izihloko eziningi zethu ziphazanyiswe ngezikhathi ze-1,000 ku-Facebook. Lezi zihloko, yebo, zinayo yonke izinhlamvu ze-3000. Yayiyi-top ye-10 ye-Google yokuqala yamaphasiwedi anzima kakhulu lapho ukusesha kwakungathi kuzungeze ukubuka kwe-3,000 ngesonto.
"Izinto eziyisisekelo zokukhangisa nge-intanethi ziyi:"
A) Umbhalo Omude
B) Umbhalo we-Worth Command Okulandelayo
Kuhlale kudingeke ukubheka lokho okwenzayo kwi-intanethi ngokubheka kwesiphequluli sewebhu. Kulungile, uma ungafuni ukukhokha ukukhangisa futhi ungafuni ukusebenzisa imali kuyo ukulanda amakhasimende amasha kuwebhusayithi yakho. Kufanele ube nento ehlukile ngempela kusayithi. Ngakho umbhalo omude, othembekile, ophelele kufanele wenze ubuqili. Abathengisi abaningi ababhala ulwazi kwi-Intanethi banganikeli izihloko ezimfushane kunezinhlamvu ze-2000. Ukuze ubhale isihloko esinezinhlamvu ezingaphezu kwe-4,000 Ngeshwa, sekuphathelene namahora angu-10 womsebenzi onokwethenjelwa. Ukumaketha kwe-Google akumnandi, ngeshwa. Lena umsebenzi onzima kakhulu futhi onokwethenjelwa kuphrojekthi yakho.
I-Nr.9. Imithombo yezokuxhumana facebook ne-LinkedIn
Ngakho-ke abezindaba bezenhlalo yisifundo sethu sokukhangisa esizithandayo. Ngeshwa, imithombo yezokuxhumana ayithinti izinjini zokusesha okwamanje. Umphumela kuphela obizwa ngokuthi imithombo yezenhlalo ngempela kumawebhusayithi ukukhuthazwa kwamawebhusayithi kwabanye abasebenzisi.
Ngesikhathi samanje, izindawo eziningi zokuxhumana nabantu ezifana ne-Instagram zivalile ukudluliswa kwedatha kuma-search. Asazi ngempela ukuthi kwenzekani. Inkampani kuphela esathumela ulwazi mayelana nenani elibizwa nge-website yakho yi-Facebook.
Kodwa-ke, kukhona into eyodwa ephazamisa kahle izikhundla ezinjini zokusesha. Lokhu okubizwa ngokuthi ukubandakanya, okungukuthi, ukucabangela ePoland ukuthi bangaki abantu abangene futhi basabele kwiwebhusayithi yakho futhi bazoqhubeka batusa iwebhusayithi yakho.
Ngakho-ke yini ngempela ekunika imithombo yezokuxhumana ekukhangiseni ku-Google? Yiqiniso, zikuletha amaklayenti amaningi kanye neminye imibuzo eminingi. Yiqiniso, lokhu kuhilela ukwandisa isabelomali sokumaketha, isibonelo, sokukhangisa okukhokhelwe. Uma imidiya yomphakathi kanye nemikhankaso yokukhangisa ilungiswe kahle nomuntu onomqondo wokuthi ungayenza kanjani, ungathola impumelelo engafanele. Abantu abaningi baye bafakazela ukuthi ku-Instagram ngokwabo bafunde ukuthola izigidi zabalandeli. Futhi ku-Facebook, wakwazi ukuthola imali yezigidi eziningana ngenyanga. Kubonakala sengathi akunakwenzeka neze. Uma unayo iwebhusayithi enhle futhi wazi ukwenza izikhangiso, ungenza irejista yezimali enhle kakhulu.
Inkampani yethu iyiphayona futhi iyona enkulu kunazo zonke ku-Facebook naku-linkedin uma kuziwa ekukhuthazeni i-Dubai. Ungahlola ngokuchofoza esithombeni esingezansi.
Nr.10 Ukuthengisa ku-Google naku-Youtube?
Uyazi ukuthi injini yokusesha enkulu kunayo yonke? Yebo lena yi-Google. Futhi injini yokusesha ye-intanethi elandelayo ngokushesha ngemuva kokuthi i-YouTube. Ngakho-ke abantu abangu-1000 bangezela inkampani ngesithombe ne-movie. Kungani, ngoba abantu abanaso isikhathi sokuhlala nokufunda isihloko esisho izinhlamvu ze-10,000. Futhi ngaphambi kokuthi bafinyelele ku-cent hundred of the case, bazochitha imizuzu engaphezu kuka-20 befunda lesi sihloko. Abantu abavame ukuvilapha.
Ngakho ungathola kanjani amakhasi okuqala we-Google. Qopha amakhulu ama-movie ngenyanga. Yiqiniso, kuzobonakala kunzima ukurekhoda i-movie futhi nokwenza isizinda esihle nokunye okunye. Njengamanje, ungathenga izizinda ezikhethekile ku-Allegro empeleni ebiza nge-PLN 200. Futhi akekho umehluko emkhakheni wezinga elifana ne-studio yokurekhoda emsakazweni ochwepheshe.
Kufanele ucabange nangokuthuthukisa umkhiqizo wakho kanye nenkampani yakho ku-YouTube. Inkampani yethu ikhuthaze ngempumelelo izinkampani ezivela e-Dubai. Sithole impumelelo emangalisayo, abantu abangamakhulu ayizinkulungwane babheka inkampani yethu futhi beyidinga futhi i-polajował eqhubekayo. Futhi khumbula, yonke i-pawn up ingumthengi ongakwazi ukuvakashela iwebhusayithi yakho.
Ukuze usebenzise ngokugcwele ukukhangisa kwe-Google, kufanele ufunde ukuthi ungasebenzisa kanjani ama-strategy amasu e-intanethi. Phakathi kwezinye izinto, dala izikhangiso zevidiyo Zinebhajethi elinganiselwe futhi Yebo ubonise ngokufanele izwe lakho. Kuye ngokuthi iyiphi inkonzo oyithengisayo, ingase ibe yisifunda sasePoland. Yiqiniso, akuwona wonke umuntu okwazi ukuthengisa amasevisi awo ku-YouTube. Kodwa ividiyo yokukhangisa ibiza ngempela ngaphansi kwe-PLN 50 ongayenza ku-Fiverr.com, isibonelo.
I-Nr.11. Ukuthuthukisa amawebhusayithi
Kulungile, ukwenzile ukumaketha ukuthi uxhume i-Google Analytics, unakho konke. Mayelana nokukhangisa futhi usukhululile umkhankaso wokuqala wokukhangisa. Manje yisikhathi sokwandisa iwebhusayithi ngekhodi ye-html. Eqinisweni, ukwenza lokhu udinga umlimi wezinhlelo. Asikwazisi ukuthi ungcwatshe ikhodi yewebhusayithi ongawazi ngayo ngolimi lohlelo. Ngoba uma lapha okungenani uma wenza iphutha, ikhasi lonke lingasuswa futhi konke okwenzile kuze kube manje kwi-wordpress noma kwenye isiteji kuzosuswa ngokuphelele.
Siyazi ngokuhlangenwe nakho kwethu ukuthi ngisho nezinguquko ezincane kakhulu zingakulimaza wena nenkampani yakho. Ngoba uma ungazi ukuthi yini okwenzayo ngempela, ungenza iphutha elimangazayo elizokukhokhela ikhasi. Ngokwakho, izikhathi eziningana ekuqaleni, inkampani yethu ifake i-portal kusukela ekuqaleni. Ngenxa yokuthi sasingazi, senza amaphutha okuphutha futhi kwadingeka senze konke kusukela ekuqaleni futhi sasilahlekisela ngempela imali eningi futhi sibheke.
Futhi khumbula, akukho okubi nakakhulu kumthengi onamandla. Njengamaphutha kuwebhusayithi. Amakhasimende cishe angu-95% ashiya iwebhusayithi uma ebona amaphutha ngoba azizwa engaphephile futhi engaqiniseki ngempela ukuthi inkampani yakho inokwethenjelwa. Khumbula ukuthi ukumaketha ku-Google nakho kusekelwe empeleni yakho.
Ukufingqa le ngxenye
Ekuphetheni, kulesi sihloko ufunde izinto ezimbalwa eziyisisekelo ezikusiza ukuba uqonde ukuthi ukuma kwamawebhusayithi kuyini. Uma ufuna ngempela ukuhlanganisa ulwazi lwakho ngokuphelele futhi uqonde ukuthi i-Inthanethi isebenza kanjani. Kufanele uhambe ku-Google ukubuyekezwa kwe-inthanethi ngezansi. Hlola bese uqedela ukuhlolwa okungakusiza ukukusiza emsebenzini wakho wesikhathi esizayo.
Uma singakwazi ukwengeza into ethile kulesi sihloko kusuka enkampanini yethu. Kudingeka ngempela ukutshele ukuthi umsebenzi we-marketer kanye namawebhusayithi wokubeka umsebenzi akuwona umsebenzi olula. Yiqiniso, lapha kuza ukukhathala nokusebenza ngempela ngaphezu kwamandla akho. Ukubeka i-portal ye-intanethi noma isitolo ongathanda ukuzenza ngaso sonke isikhathi kaningi akungabongi.
Kodwa ungayeki ukulwa ngaso sonke isikhathi, ayikho indlela ongahluleki ngayo. Silinde iminyaka eminingi nenkampani yethu e-Dubai futhi kwakungemva konyaka wesithathu ukuthi sikwazi ukuthola izikhundla ezinokwethenjelwa ezinjalo ezisilethela inzuzo kusuka ku-Google. Ngakho okungenani kufanele uhlose cishe iminyaka emithathu. Khumbula ukuthi ngokwesilinganiso, izinkampani zizibeka ngokwazo kusukela ku-5 kuya ku-7 iminyaka futhi lokhu kuyimfuneko okumele uyigxile kuyo. Ngeshwa, ukubeka indawo kuyinkqubo ehlala isikhathi eside esithatha isikhathi esiningi. Futhi ithatha imali eyengeziwe.
I-PS lesi sihloko sinezinhlamvu ze-5,000. Ngakho njengoba usuvele usolungile, usitholile kwinjini yokusesha ye-intanethi. Uke wafunda yonke indaba yethu futhi uyamangala ngalokho esikubhalile? Sivele sikubonele ukuthi ubude nekhwalithi ye-athikili kubalulekile ezinjini zokusesha. Isihloko esibhaliwe futhi esijulile esibhaliwe, okuqukethwe kwakho ngokushesha kuGoogle. Ukubingelela futhi ubheke phambili amazwana akho noma ucingo lwakho oluvela kuwe. Sizokusiza nakanjani ukumaketha nokubeka iwebhusayithi yakho ePoland noma kwamanye amazwe.
Izizathu eziningana zokuthi kungani kufanele uphathe iwebhusayithi yakho ye-SEO
Namuhla, cishe i-95% yezinkampani ine-website yayo. Kodwa ngempela kuphela amawebhusayithi athuthukisiwe kahle futhi ahlelwe kumakhasimende wokuwina weGoogle. Eqinisweni, ukwenza iwebhusayithi ngeke ikulethe amakhasimende, noma imiphumela engalindelekile. Namuhla ngisho ne-website eyenziwe kahle ayikwenzi imali.
Ngakho, ukubeka iwebhusayithi akuyona into kodwa ukugqugquzela ibhizinisi lakho le-inthanethi.
Uma ufuna ukuqhuba ibhizinisi e-intanethi ephumelelayo futhi enenzuzo kakhulu, kufanele uthole iklayenti ngempela kuphela kusuka kwamagama angukhiye ephilayo. Siyazi ngokuhlangenwe nakho ukuthi ngaphezu kwe-85% yezikhangiso ku-okuthiwa i-Google AdWords ayinamandla kakhulu uma unebhizinisi elincane. Izikhangisi ezikhokhwa ku-Google ziyasetshenziswa kuphela yizinkampani ezinkulu kanye nalabo ababeke phambili kakhulu kwizinjini.
IPoland yisibonelo esihle kakhulu sokuthuthukiswa kwebhizinisi kwi-intanethi. Inani lamakhasimende amasha ngqo kusuka ku-Google lenyuke cishe ngu-55% eminyakeni emihlanu edlule. Yiqiniso, kusukela ngo-2015, ijubane lokuthuthukiswa kwe-intanethi nezitolo ze-inthanethi likhula ngokushesha kakhulu. Okwamanje, amakhasimende ku-intanethi afuna lonke ulwazi oludingayo ngomkhiqizo. Amapolisi ayanda ukuthenga ezitolo ze-intanethi, isibonelo, ku-Allegro noma ku-OLX.
Ama-blogs amasha we-Google aphuma ngokuphindaphindiwe nangaphezulu. Ngokuningi okuthiwa ama-bloggers engeza ulwazi nezincazelo mayelana nokuhamba noma izingubo. Futhi umqondo wemakethe kwi-intanethi futhi ukwandiswa unyaka nonyaka ikakhulukazi emadolobheni amakhulu afana neWarsaw noma eKrakow ngisho naseLegionowo.
Yini i-SEO nokumaketha?
Ukubeka amawebhusayithi empeleni kukwandisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho kuzinjini zokusesha. Kusukela esiNgisi kungcono injini yokusesha injini noma i-SEO. Namuhla, yonke inkampani ine-SEO yayo kanye nomnyango wokuthengisa. Izinkampani eziningi zakha umkhiqizo wazo kwi-Inthanethi zandisa ukubonakala kwewebhusayithi yazo, zakha brand yazo, zandisa igunya lesizinda futhi, yiqiniso, zama ukubeka indawo yaseWarsaw ngendlela ephumelelayo ngangokunokwenzeka.
Lapho usuqala ukubeka iwebhusayithi yakho ukubeka indawo yakho, yandisa ukubonakala kwenkampani yakho futhi ihehe amakhasimende amaningi asebenzisa izinsizakalo zakho noma athenge imikhiqizo yakho esitolo sakho online. Awudingi ukuba yisazi sefilosofi ukubona ukuthi amakhasimende amaningi athenge ku-inthanethi futhi ulwazi lokuhlola mayelana nenkampani.
Empeleni, iningi labantu abasebenzisa i-intanethi abakwazi ukuphequlula wonke amawebhusayithi nezitolo lapho banikeza khona umkhiqizo ofanayo kakhulu ebhizinisini lakho.
Ngaphezu kwe-85% yabantu bangena ezikhundleni eziphezulu ze-5 ku-Google. Kukhona ngisho nezwe elihle kangaka lokukhangisa ukuthi uma ufuna ukufihla isidumbu bese ukwenza ngakolunye uhlangothi lwe-Google.
Izizathu ezimbalwa ukuthi kungani kufanele ubeke isikhundla ephezulu ku-Google iwebhusayithi yakho?
Amaklayenti angaphansi kokuxabana
Yandisa ukufinyelela kwebhizinisi lakho
Iklayenti elibuyela emuva kusuka kunjini yokusesha ye-intanethi
Kungenzeka ukukhumbuza ikhasimende nge-imeyili yokuthengisa
Ukunciphisa ukukhishwa kwemisebenzi yamakhasimende enkampanini
Ngesikhathi samanje, ukujwayela kokugcina esitolo nokuthenga ku-inthanethi kuye kwanda. Ikakhulukazi intsha, ngisho nomfowenu osemncane, yaya nje esitolo se-RTV esitolo. Wabheka imikhiqizo yahlola izilinganiso kwi-intanethi futhi nje yabuyela ekhaya ithengile lo mkhiqizo kwi-intanethi. Indlela ehlakaniphile ngoba izinkampani eziningi zibonisa imikhiqizo esitolo ingabiza kakhulu ngoba kufanele isebenzise umkhawulo wabo. E-intanethi Yiqiniso, bayakwazi ukwenza isaphulelo esincane laphaya.
Ungaqala kanjani ukubeka iwebhusayithi kahle?
Ngakho ukuqala ukubeka iwebhusayithi yakho kahle, kufanele uqale kusukela ekuqaleni. Bona ukuthi isayithi libukeka kanjani nokuthi yisiphi isivinini esivela kuleli khasi nokuthi ngabe akekho ophule ukuma futhi wenza okubizwa ngokuthi izixhumanisi zogaxekile.
Kumele uhlole umkhiqizo enjini yokusesha ukuthi ikheli lilungile nokuthi ngabe inkampani ofuna ukuyibeka futhi inkampani yakho siqu inezibuyekezo ezinhle. Kunezici eziningi kakhulu ezithonya ukuthi isayithi lakho liphakeme emiphumeleni noma ngaphansi.
Empeleni, izikhathi zanamuhla zidinga izixazululo ezingezona ezejwayelekile. Njengamanje, yonke i-SEO incike ekusebenziseni kwe-Google algorithms. Yiqiniso, izinhlelo ezisetshenziswa le nhlangano ziyimfihlo ye-100%. Ngakho-ke, ochwepheshe abathathu ekubekeleleni amawebhusayithi abanalo ulwazi ngomsebenzi abawenzayo ngempela?
Akuzona izazi ngokuphelele ezisebenzisana namakhasimende ziqondwa kahle ngokuma endaweni yangakini etholakala kumawebhusayithi e-Google, ngokwesibonelo amakhadi webhizinisi le-Google noma amamephu we-Google.
Umchwepheshe ngamunye uhlukanisa ukuma kwewebhusayithi kube yizici ezimbili eziyinhloko.
Iwebhusayithi ukubeka nokuthuthukisa isayithi ngaphakathi. Ukuthuthukisa ikhodi yekhasi nokuhlola isivinini sekhasi.
Futhi ukubeka amakhasi angaphandle, okungukuthi, ukungeza izixhumanisi zangaphakathi nokugqugquzela imikhiqizo kwamanye amawebhusayithi.
Kungani ukhetha inkampani yethu?
Inkampani yethu yokukhangisa ivela e-Dubai naseLondon. Sizame futhi sibeke amawebhusayithi ngempumelelo kwamanye amazwe. Njengamanje, inkampani yethu isiza osomabhizinisi basePoland ukubeka amawebhusayithi wesifunda, isibonelo eWarsaw, eKrakow nasemadolobheni amancane afana neRadzimin.
SEO - Call ME namuhla futhi uhlele mahhala Marketing caphuna!
Ukubeka Iwebhusayithi nokufaka uphawu ku-Abu Dhabi
-Ulwazi oluhle mayelana nendlela yokuthuthukisa ibhizinisi lakho le-intanethi!
Uma ufuna inkampani ezokusiza ukubeka iwebhusayithi yakho ku-Emirates. Sikumemela ngokufudumele ukuba ubambisane nenhlangano yethu. Sinesipiliyoni seminyaka eminingi yokubeka amawebhusayithi ku-Google.
Ngalezi zikhathi, ukuma kwamawebhusayithi, ngeshwa, kuwumsebenzi onzima futhi kunalokho kudinga ukubambisana nabantu abazi ikhulu lamaphesenti ukuthi yini ngempela okudingeka yenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi isiza sinesikhundla esiphezulu ezinjini zokucinga.
Mayelana nebhizinisi le-intanethi ku Abu Dhabi?
I-Abu Dhabi idolobha elithile impela uma kukhulunywa ngebhizinisi eliku-inthanethi. Abu I-Dhabi ngokuvamile iyiphuzu empumalanga ye-UAE. Eduzane nenhloko-dolobha ye-Dubai Voivodehip kuyinto isikhungo esiphakathi sebhizinisi leGulf impi e-Emirates.
I-109 th inani elikhulu lomuzi e-UAE nelesibili e-UAE, ngaphezu kwezakhamuzi ze340,000 ezise2018 zabhaliswa ehhovisi. Futhi, uma sibheka izibalo zokubhalisa uqobo, kufanelekile ukutshala imali ebhizinisini kwi-Intanethi e-Abu Dhabi.
Abantu abaningi kulezi zikhathi bafuna amawebhusayithi amaningi nemikhiqizo kwi-intanethi. Futhi uma ufuna isayithi lakho ukuba libekwe kumazinga wokuqala wamawebhusayithi, kufanele wazi ukuthi kunikezwa isayithi lethu.
I-Abu Dhabi ingelinye lamadolobha esiwathandayo futhi ukusuka lapho sinamakhasimende ambalwa abeka amawebhusayithi e-UAE.
I-Abu Dhabi idume ngokuba idolobha labafundi, ngakho amawebhusayithi e-SEO e-Abu Dhabi adinga ukukhunjulwa. Ibhizinisi liqala ngonyaka wezifundo futhi lapha yisikhathi esishisa kakhulu lapho empeleni idolobha ligcwele izitshudeni nempilo ezindaweni zokudlela.
Zonke ezinye izinyanga e-Abu Dhabi zikhona izinyanga zasehlobo futhi ungasho ngesibindi noma ungathola kahle ngesikhathi sonyaka ebhizinisini. Kulokhu kanye nebhizinisi e-Abu Dhabi yilokho okungenani isilinganiso semali engenayo.
I-Abu Dhabi impela idolobha elitshalomali eliphakathi naphakathi. Futhi kunalokho, izimali ezinkulu lapha azisebenzi ngisho nalapho kuziwa ebhizinisini le-intanethi. Ukubeka nokumaketha ku-Google lapha kungakwenza njalo.
Uma kuziwa kwi-website ukubeka ezimakethe zendawo. Ngeshwa, uhlelo lokuthandwa kwamakhasimende nomnikazi wenkampani lukhona lapha. Ngezansi uzothola izinkampani ezimbalwa esibambisana nabo e-Emirates futhi sibeka amawebhusayithi abo.
Njengoba owokuqala e-Abu Dhabi ukukukhombisa ukuthi sesivele sisebenza emakethe yasendaweni, sizobe sithatha imigoqo ngamaswidi we-bebab nezinkwa zokudlela zasendaweni zabafundi.
Sekuphele iminyaka eminingi senza amawebhusayithi e-SEO kanye ne-Marketing futhi iningi lamakhasimende ethu liyaneliseka.
SEO e-Abu Dhabi - Shayela namhlanje futhi uhlele ukucaphuna kwamahhala!
website ukubeka izinhlelo free
Izophathwa uqobo nguJohn West
I-SEO yamadolobha amancane e-UAE kanye namakhasi endawo. Sihlala Samukela ozakwethu kusuka kumawebhusayithi amancane. Amakhasi ethu ezikhundla zenkampani e-Emirates. Sisize amakhulu ezinkampani ezincane ezisebenza esifundeni se-Gulf.
Amancane ingxenye yamadolobha ase-Emirates Ungumasipala othandwayo, uyazi ukuthi yini ngempela idolobha elakhiwe kahle e-Emirates esifundeni se-Gulf.
I-Voivodship esifundeni sase-Dubai, lapho kunezinkampani eziningi ezipholile ongaqala ukusebenzisana nazo. Futhi amakhasimende lapho ungahlinzeka khona amasevisi noma amasevisi wakho.
Amadolobhana amancane aseduze naseDubai nase-Abu Dhabi empeleni angamakhilomitha angama-25 kuphela ukusuka enkabeni yeDubai. Futhi ngokuqinisekile ikhasimende elicebile lapho ungathengisa khona imikhiqizo yakho.
Ngalezo zikhathi wonke umuntu une-inthanethi eDubai. Cishe wake wazibuza kaningi ukuthi kufanele wenze kanjani ukufinyelela kulo lonke idolobha ngosuku olulodwa. Yebo, impendulo elula ukumaketha kwe-inthanethi. Inkampani yethu iyakwazi ukukusiza ubeke futhi ithuthukise ibhizinisi lakho emadolobheni amancane e-Emirates.
Simiselela iwebhusayithi yakho endaweni engaphansi kwedolobha laseDubai!
Sigqugquzele futhi sabeka ezinkampanini zamakhulu izinkampani eLondon, eLondon, eBrussel. E-Emirates, kunezakhamizi ezingaphezu kwe-15,000, idolobha linamakhilomitha skwele angaphezu kwe-24,000. Futhi, amandla okuthengisa umkhiqizo wakho nokubeka ibhizinisi lakho online lihle kakhulu.
Ingabe kufanelekile ukubeka iwebhusayithi ku Emirates?
Ngakho isilinganiso sobudala kule ndawo ongayifinyelela kwi-intanethi phakathi kwe-20 ne-65 yeminyaka ubudala. Ngakho-ke, ukukhuluma, abantu abaningi basasebenza noma banezinzuzo ezingenayo. Lokhu kubalulekile uma kuziwa ekukhuthazeni imikhiqizo yakho kwi-inthanethi. Ngoba kungcono ukuthengisa imikhiqizo kwi-intanethi kubantu abanemali ngempela futhi bayakwazi ukuyisebenzisa nganoma isiphi isikhathi.
Abantu abakulesi sikhathi e-Emirates nakanjani basebenzisa imithombo yezokuxhumana njenge-Facebook. Siyakwazi ukukusiza uthole ngaphezulu kwamakhasimende we-10,000 ngosuku olulodwa.
Ngakho-ke uma ungathanda ukukhuthaza ibhizinisi lakho I-UAE noma ngisho naseGulf. Inkampani yethu inikezela ngokuma okusemthethweni kwamawebhusayithi eDubai nasezindaweni ezizungezile. Ukubekwa kwe-Dubai kanye ne-Abu Dhabi Amakhasi kungenzeka kithi kuGoogle !.
Inkampani yethu iye yabambisana ngokuphumelelayo futhi iyaqhubeka ibambisana namafemu angaphandle kanye nongcweti yenkampani ekukhangiseni. Futhi izinkampani ezisebenza eMpumalanga Ephakathi. Phakathi kwezinye izinto, sisize izitolo ze-intanethi nenkampani eyayidinga ukufinyelela amakhasimende ngokushesha. Yiqiniso, ukubeka amawebusayithi kudinga isikhathi esingaphezu kwezinyanga ze-6 cishe ngonyaka.
Ama-pavilion wentengiso osomabhizinisi bendawo, amaklayenti akho athi ngemuva komsebenzi afune imikhiqizo kwi-inthanethi. Sizokunikeza konke emkhankasweni wokukhangisa lapho sizokukulungiselela ngokukhethekile. Ummeleli wenkampani yethu uzoza e-ofisini lakho noma ekhaya ukuzokhuluma ngalokho ozoqala ukukhuthaza online. Inkampani yethu isiza ngokweqiniso. Sifuna ukusiza amaklayenti ethu. Ithimba lethu lakwa-HR alifuni abantu abazikhohlise.
Sifuna ukusiza amaklayenti ethu e-Emirates
IDubai City Company ifuna ukukusiza wenze ubukhona bakho emakethe yasendaweni. Ngaphezu kwalokho, sinamathuluzi okukwenza, sazi ukuthi ungakusiza kanjani ekutholeni imali eyengeziwe futhi wakhe ibhizinisi emakethe yasendaweni eduze naseDubai. Vele, uma ufuna, sizokwazisa ngecebo lokusebenzisana nokubekwa kwewebhusayithi emakethe ye-UAE. Ukusuka eDubai, kuyi-25 km kuphela enkabeni yedolobha. Ngakho-ke uma unomkhiqizo noma insiza enhle kuzokuthatha imizuzu ye-20 ukufika enkabeni yedolobha. Ngakho-ke siyakwazi ukukusiza wakhe ibhizinisi endaweni yangakini futhi dlulela esifundeni sonke se-Gulf kumkhiqizo noma ngomsebenzi wakho omuhle kakhulu.
Sithemba ukuthi uzosinika ithuba futhi ake sibeke iwebhusayithi yakho ku-UAE. Uma ungathanda Ungafunda futhi ulwazi oluthe xaxa mayelana nokusetshenziswa kwe-geolocation nokumaketha kwe-Inthanethi, isibonelo ku-Instagram.
Ngemva kokufunda ezimbalwa zezihloko zethu uzobona ukuthi sinomqondo ngempela ngalokho esikwenzayo ekumaketha nokumaketha kwe-imeyili. Yiqiniso, ukubeka amawebhusayithi kuwumsebenzi wethu oyinhloko. Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza uphawu lwakho lenkampani ekhadini lebhizinisi le-Google futhi ukwandise iwebhusayithi yakho ukuze amakhasimende wendawo afune inkampani yakho futhi akuthole kuqala.
Ukufingqa nge-SEO e-Dubai
Ngakho-ke, ukubeka esikhundleni se-UAE - Kungenzeka futhi kunethuba elihle lokuthi uzoba ku-Top 10 Google uma usinika ithuba kamuva kulo nyaka. Umncintiswano wase Dubai ne-Abu Dhabi ukhula njalo. Ngeshwa, ukumaketha kwe-inthanethi kusebenza ukuze uma kulo nyaka umuntu othile abuyele esikhundleni sokuqala se-Top 3 engxenyeni yokusesha futhi amakhasimende azoqala ukwengeza impendulo enhle.
Kunzima ngempela ukuthola le nkampani inkampani entsha. Futhi, kufanele ucabange ngokusebenza nenkampani ukuthi izikhundla uphinde ukhuthaze imikhiqizo ye-intanethi.
Ngakho-ke sinethemba lokuthi uzosithinta, silangazelela ukukholwa kwakho. Sizokubona edolobheni elihle laseRadzymin, Ngikufisela inhlanhla nempumelelo engaphezulu ekwakheni ibhizinisi eduze naseDubai.
Ungathola kanjani abalandeli ku-instagram?
Ungathola kanjani abalandeli ku-instagram? - Unayo noma awukho lapha umbuzo! Esikhathini sethu, ukuxhumana nabantu kungenye yezindlela ezithandwayo kakhulu zokuxhumana phakathi kwabantu abasha. I-Instagram ingomunye wabasebenzisi ababandakanya kakhulu yesikhulumi uma kuziwa ekukhangiseni okuqondile kwi-intanethi.
I-Instagram ayiyona yesikhulumi esivamile esiyokusiza ekubekeni iwebhusayithi noma ku-SEO. Kodwa ngokuqinisekile ukuwina abalandeli abaningi kuzokwandisa ukuqwashisa nge-brand yakho futhi kuthuthukiswe ukubizwa okubizwa nge-Brand Brand.
Indlela yokuthola abalandeli kwi-instagram - Ukuthengisa ngokuzenzakalela kusuka ku-Dubai City Company
I-Instagram ingokwesizukulwane Y, noma kubantu abazalwa ngama-80 ekhulwini lama-20. Manje sesiyisizukulwane seMillennium, okuthiwa isizukulwane se-digital. Ngakho ukufika kulolu hlobo lwezethameli kudinga iziteshi zamanje zokukhangisa zanamuhla.
Ngenxa yokugqugquzela umkhiqizo wakho kanye nensizakalo kumzila we-Instagrama, singafinyelela amakhasimende amaningi nabankontileka. Le platform yokumaketha, naphezu kokubonakala, akuyona nje amantombazane amancane akhuthaza izintelezi zabo. Nokho, ngezinye izikhathi kufanelekile ukufaka nokubona ukuliqhathanisa.
Imikhiqizo kaGentlemen kanye nezinsizakalo zangaphandle!
Ngakho-ke ukuqala kuphi ukuthola i-Instagram yakho kumakhasimende amasha. Indlela elula ukuqala ngokudala i-akhawunti kule platform yezenhlalo.
Indlela yokuthola abalandeli kwi-instagram - Qala ku-Instagram - Dubai City Company
Injabulo enjalo ngaphambi kokuba siqale ukufunda Indlela yokuthola abalandeli ku-Instagram. Le platform yayisivele i-Facebook iminyaka eminingana. Ngakho uma unikeza ukukhangisa ku-Facebook kusuka kumshini, ungabheka ukuthi nazo zivela ku-Instagram. Siyazi ngokuhlangenwe nakho ukuthi kunengqondo ngempela futhi abantu abaningi bangena ku-Instagrama phakathi nemikhankaso yokukhangisa. Lokhu kungcono kakhulu ukwengeza kuzikhangiso ku-Facebook. Ngale ndlela singakwazi ukufinyelela amakhasimende amaningi.
Ngakho-ke inethiwekhi yezokuxhumana ethandwa kakhulu lapho okwamanje izigidi zabasebenzisi baseMelika nase-Asia zishicilela izithombe namavidiyo azo ngezihloko ezihluke kakhulu.
Instagram wadalwa ku-2010 futhi waqala umsebenzi wakhe njengendlela lokusebenza ye-apple. Instagram ngokushesha wakhula kwi-intanethi. Kusuka kwesicelo esincane cishe eminyakeni engu-2 futhi yenza insizakalo yokuxhumana nabantu efana nenkampani yedijithali.
Ngaphansi kweminyaka engu-3, lolu hlelo lokusebenza luhlolwe emazweni amaningi ikakhulukazi eMelika Ephakathi ekuqaleni. I-Instagram yathathwe ngu-Facebook ngenkokhelo enkulu yemali engaba amadola ayizigidi eziyizinkulungwane.
Isici esiyinhloko salesi sigaba esasithandwa kakhulu sasiklanywa ngempela. Yiqiniso, le nkampani yayingewona owokuqala lapho kunezinkampani eziningi ezisekhona ngaleso sikhathi zanikeza isevisi efanayo. Kodwa-ke, i-Instagram iye yakhashisa ukwengezwa kwezithombe zayo kanye nekhono lokuhambisa isikrini phansi ngezinga elikhulu kakhulu kunomncintiswano. Futhi sinqume ngempela ukuthi kungani le platform yenze omunye wezicelo ezinkulu zokukhangisa ze-Facebook.
I-Instagram nayo ihlanganisa kalula kalula amathuba okufaka izithombe ngqo kusuka efonini kuya kwesicelo. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha kusukela ekuqaleni kwesicelo, inkampani isivele inebasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezimbalwa ababhalisiwe. Instagram yasabela ngokushesha kakhulu futhi yanezela kwesicelo sayo. Ikhono lokuzithombe ngokushesha izithombe.
Ingabe kufanelekile ukuqala ukumaketha kusuka ku-Instagram e Dubai?
Instagram iyisimo esithile sokukhangisa esithile. Igxile kakhulu eqenjini lezenhlalakahle elibhekene nemfashini, ukuhamba kanye nezinsizakalo ezahlukene kwabesifazane. Ngokuqondene namadoda, kunezimo ezincane zezinkampani ezikhuthaza izinsizakalo zabo kubasebenzisi besilisa besilisa. Kodwa lezi zinikeza okunikezwayo okungajwayelekile.
Indlela yokuthola abalandeli ku-instagram - 100% Yokuzenzekela Kokukhangisa! - I-Dubai City Company
I-Instagram isitshela ngokucacile ukuthi iphesenti lokubandakanya abasebenzisi kule platform likhulu kunalesi simo samanye amanethiwekhi omphakathi, isibonelo i-twitter. Ngokuyinhloko ngoba abesifazane abahlala ku-Instagram bamane bapheqa izingubo eziningi ngaphambi kokuba benze isinqumo.
Kungani kufanelekile ukuqala kusuka kwesikhulumi se-Instagram? Ukucabangela ukuthi ukubandakanyeka kwabasebenzisi be-Instagrama kuphakeme kakhulu kune-Facebook noma i-Twitter. Futhi iqiniso lokuthi Instagram ku-2018 linamalungu angaphezu kwezigidigidi ze-3 asetshenziswe ngokusitshela ukuthi wonke umuntu wesithathu emhlabeni usebenzisa njalo le sayithi.
Ngakho ungaqala kanjani ukuthola abalandeli?
I-1. Gcwalisa iphrofayela yakho yenkampani ku-Instagram
Ekuqaleni Kufanele ucabange ngenhloso ethize yokuvula i-akhawunti ye-Instagram. Ngoba kule platform ungakhetha phakathi kwe-akhawunti yangasese noma i-akhawunti yenkampani. Ngakho uma ukhetha i-akhawunti yenkampani, ngeshwa kufanele uzixhume ku-akhawunti yakho ye-Facebook. Lokhu kunezinzuzo zayo njengoba kuzokuvumela ukuba ugcwalise idatha yakho eyisisekelo futhi uvumele ukuthi ukhethe imboni ozoyikhangisa ngayo.
Iphrofayela ye-Instagram yenkampani inikeza ukufinyelela okwengeziwe kwezibalo futhi ikuvumela ukuthi udale izikhangiso ezixhasiwe. Ngakho ekuqaleni kufanele ukhethe isithombe esivela eceleni noma iphrofayli yephrofayela ukuze abanye abasebenzisi bachofoze kuphrofayela yakho. Kunoma yikuphi, isithombe kufanele sihlotshaniswe nenkampani yakho noma ibhizinisi lakho.
Into elandelayo ingeza into ehlakaniphile ebhizinisini lakho elihlukile le-inthanethi noma incazelo yenkampani yakho. Zama ungalokothi ukopishe umbhalo kusuka kwamanye amawebhusayithi noma amanye amawebhusayithi. Ngoba njengamanje izinjini zokusesha ze-intanethi zibizwa ngokuthi izihlungi zogaxekile. Lezi zihlungi zifuna umbhalo okopishwe kusuka kwamanye amasayithi bese unciphisa ngokuzenzakalelayo izikhundla zekhasi lakho ku-Instagram.
Kubalulekile ukuthi iwebhusayithi yakho ibhalwe ezincwadini ezinkulu. Futhi igama lenkampani yakho lalibukeka lingavamile. Kulungile, ngaphandle uma ufuna ukuthuthukisa umkhiqizo wakho ungayenza kahle ngendlela yokuthi abantu abakufunayo ku-Instagram bachaza igama lenkampani yakho noma umkhiqizo wakho. Khumbula ukuthi into ebaluleke kakhulu ekugqugquzelweni kumanethiwekhi omphakathi kungenxa yenkampani yakho noma igama lakho ukuba libheke futhi libaleke kalula.
Enye into ebaluleke kakhulu. Instagram wanezela ukuthi kungenzeka ukwengeza okuthiwa ama-hashtag. Yilokho, okuthiwa amagama angukhiye e-picket abasebenzisi abangabasebenzisi be-Instagram abangasesha ngokufaka ulwazi ngalesi sihloko kumaphrofayela abo. Isibonelo, inkampani yethu isebenzisa: #DubaiCityCompany
Indlela yokuthola abalandeli ku-instagram - Ukukhangisa Ukuzenzekelayo! - I-Dubai City Company
I-2. Qala ukuthuthukisa iphrofayela yakho
Ekuqaleni, siphakamisa ukuthi uqiniseke ukuthi abantu asebevele beya ku-Instagram bafunda ukuthi uvule i-akhawunti lapho nokuthi lokho kubizwa. Indlela eyengeziwe yokwazisa wonke umuntu owasebenzisana naye ngaphambili wavula i-akhawunti yakho entsha ye-Instagram.
Ukuvele nje wenze okufushane ku-Facebook, i-twitter, i-linkedin, i-goldenLine. Yiqiniso, ungalindeli imiphumela emangalisayo emangalisayo futhi ngokuzumayo abantu abayizinkulungwane ezimbili abazolandela iphrofayela yakho.
Njengamanje, ngaphezulu kwe-40% onayo ku-Facebook cishe kakade unayo i-akhawunti ye-Instagram. Njengoba wazi ama-Instagram we-Instagram axhunyiwe ndawonye, ​​ngakho-ke baqinisekile ukushintshanisa idatha. Ngakho umuntu olandela iphrofayela yakho ku-Facebook uzokwaziswa ngokuqondile emshinini ukuthi nawe une-akhawunti ye-Instagram. Ngakho kufanele ucabange ngokujulile ngezikhala ezimbalwa ekhasini lakho lebhizinisi le-Facebook.
I-3. Shicilela izinto zokuthengisa ku-Instagram
Kanjalo izithombe zingisize ngombuzo Ngingathola kanjani abalandeli ku-Instagram?
Uma kuziwa ezithombeni nasezincwadini zezindaba, isu elihle nokusebenza kwalo okuqhubekayo kusetshenziselwa ngokuqhubekayo ngokuphathelene no-Instagram. Futhi ukuzinikezela okuphelele kwesikhathi sakho kuzokukhokhela ngokuphumelela kwephrofayela yakho entsha kanye nokuthola inombolo entsha yabalandeli.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyigxile lapha yikhwalithi yezithombe zakho kanye nekhwalithi yama-movie wakho oyoshicilela. Isibonelo, amavidiyo asesimweni se-HD angaphezu kwe-50% ngaphezulu kaningi ku-instagram naku-Facebook. Futhi, ikhwalithi yezinto zakho zokuphromotha kufanele zibe ezingeni eliphakeme ngoba ezinye izinkampani zinikeza cishe konke okuku-HD kuphela.
Okubaluleke kakhulu kumasu wokuthengisa ku-Instagram ngu:
Yabelana ikakhulukazi izinkampani, hhayi izithombe. Abasebenzisi be-Instagram banamathuba amaningi okuphendula kumafilimu kunokuba bathathe izithombe. Namuhla, ama-Instagram ne-Facebook algorithms ashintshile amasistimu abo ukuze ama-movie azokhuthazwa kaningi. Lokhu kubangelwa umnotho we-server ohlanzekile. Ifilimu ithatha ngempela i-200-300 MB nabantu ababuka ezinye iziteshi bachofoza izikhathi ezimbalwa. ngakho emva kwesikhathi esithile i-movie izosuswa ohlwini. Ngeshwa, kufanele usho ngokuvulekile, abengeyona ethandwa kakhulu ku-Instagram njengezinkampani.
Khetha izithombe eziphezulu kuphela zekhwalithi! Uma uya kwi-movie ephezulu ye-10 ku-Instagram. Uzobona maduzane ukuthi iningi lalezi zinkampani lithunyelwe kuphela ezithombeni eziphezulu kakhulu ezibekwe uphawu, Yebo, ngokwanele kulokho abakuchazayo. Uma uqala ukuthumela izithombe ezisezingeni eliphansi ngempela noma izinga eliphakathi. Ngokuqinisekile abantu bazoqala ukushiya iphrofayela yakho.
Izithombe zokuhlela Umdlalo olandelayo ohlakaniphile uzoba ukuhlela kwezithombe ngezihlungi. Iningi lama-filters e-Instagram awaziwayo akwazi ukuthuthukisa imibala bese engeza imiphumela enhle. Ikakhulukazi efonini, abasebenzisi abaningi basebenzisa isihlungi seMayfair. Kodwa-ke, uma uhle ngokuhlelwa isithombe, kungumphumela omuhle ngempela. Ngingakusiza ukuthi uthole abalandeli abaningi.
Sebenzisa ama-hashtag esithombeni ngasinye. Isamba esiphezulu ongayengeza yi-30 hashtas. Ukuze uthole okulungile emsebenzini ongathanda abanye abasebenzisi be-Instagram ukukufunayo, siphakamisa ukuthi ubone i-webstagram. Lewebhusayithi elula lapho ungakhetha ama-hashtag athandwa kakhulu. Futhi ngesisekelo salokhu, khetha okuthandwa kakhulu futhi yiqiniso kulowo nalowo okuthunyelwe ozokwengeza ku-Instagram ukuze ungeze ama-hashtag akho owathandayo.
Indlela yokuthola abalandeli ku-instagram - Webstagram Ukudala ama-Hasztags wokuthengisa!
Shicilela izithombe zamahora angu-24 ngosuku. Kuleli qophelo, uyazibuza ukuthi kungenzeka kanjani ukushicilela izithombe namavidiyo ku-Instagram cishe amahora angu-24 ngosuku. Ngakho impendulo ilula, kufanele uqale ukusebenzisa izinhlelo zokumaketha ezikusiza ukuba wenze ngokuzenzakalelayo ukumaketha.
I-4. Sebenzisa izinhlelo ezizenzekelayo ukumaketha
Uhlelo oluzenzakalela kakhulu lwe-automation ye-Tailwind. Inkampani yethu isisebenzise ngempumelelo lolu hlelo lokusebenza ukwandisa inani labalandeli ku-Instagram. Yiqiniso, ekuqaleni sasebenzisa ithebhulethi ejwayelekile. Kodwa emva kwamasonto amathathu noma angaphansi kwamanye amaqembu sabona ukuthi empeleni ukungeza izikhala kumele kube cishe njalo amahora amabili ukuze kube nenani elivamile labalandeli embonini yethu.
Indlela yokuthola abalandeli ku-instagram - Tailwind Marketing Automation!
Lolu hlelo lukuvumela ukuba usethe ngempela inombolo enkulu kakhulu yokuthunyelwe. Yikuphi ngaphandle kwamasheya wakho kuzothunyelwa ku-Instagrama ngenkathi ulele, isibonelo. Ngakho inkampani yethu iqale ngokusuka ekuqaleni ngokusebenzisa lolu hlelo kanye nohlelo lwe-buffer. Sande inani labalandeli ku-Instagram kuya kwe-5,000. Njengamanje, sinayo i-Instagram enkulu kakhulu embonini yethu, ngakho-ke asigxili kakhulu ekuthuthukiseni lesi siteshi sokumaketha.
Indlela yokuthola abalandeli ku-instagram - Ukuthengiswa kwe-Buffer Automation!
I-5. Beka amazwana bese uyazisa
Ngokuvamile abantu abane-akhawunti kakade babheka iziteshi ezisebenzayo. Kuleli phuzu, umsebenzi wakho uzobasiza ukuba bathuthukise ibhizinisi labo. Indlela elula yokwenza lokhu ukwengeza amazwana noma imininingwane emfushane ngomkhiqizo wakhe. Siyabonga ngokuthumela isithombe noma ukungeza ulwazi oluthandayo.
Iningi labantu ngizibuza mina umbuzo ofanayo kanjani ukuthola abalandeliów Instagram? Futhi-ke basize abanye bazokusiza. Ngokufaka amazwana ukwazisa abanye abasebenzisi ukuthi uyayithanda futhi, ungaphinda wengeze ulwazi landela iphrofayli yami noma Hey Bona futhi isithombe sami. Abasebenzisi abangu-80% bazolandela iphrofayli yakho, Yebo, njengoba uzofaka amazwana ngewebhusayithi yabo kanye nenkampani yabo. Siyazi ngokuhlangenwe nakho ukuthi isebenza ngempela ngoba isimo sethu somuntu sakhiwa.
Futhi masiqiniseke ukuthi imithombo yezokuxhumana idala ukuxhumana phakathi kwabantu. Ngokuvamile, lokhu kwakungokucabanga kwalokhu kusebenza njengoba kucatshangwa ngeminyaka engu-15 edlule. Labo bantu baxhumana nabantu ngokushesha.
Futhi wabambisana ne-intanethi hhayi kuphela ehlala. Indlela elula ukuthola abantu bangakini. Isibonelo, Uma ufuna ukuthuthukisa ibhizinisi lakho e-Warsaw.
I-6. Hlaziya idatha yokumaketha
Ukuhlaziywa kwedatha yokumaketha ukubeka iphrofayli yakho nakho kuyinto ebaluleke kakhulu.
Unayo noma awukho lapha umbuzo? Landa idatha noma ungalandi idatha?
Indlela yokuthola abalandeli ku-instagram ngokuhlola idatha yokumaketha.
Indlela elula yokuhlola idatha nokuthola le datha ngokuqinisekile isebenzisa uhlelo lwe-Tailwind. Into elandelayo okufanele uyenze ukuhlola i-Google Analytics. Kuyafaneleka ukungena ngezikhathi ezithile futhi ubone ukuthi bangaki abantu abangena ku-Instagrama, ikakhulukazi uma uhlela umkhankaso wokwazisa ku-Facebook.
I-7. Maka abasebenzisi abathandwayo
Ukwengeza nokumaka, ngisho ne-hashtaging, kwandisa amandla okufinyelela abasebenzisi bendawo. Isibonelo, Uma uhlala eduze kwaseWarsaw futhi ungathanda ukwandisa ibhizinisi lakho edolobheni laseLegionowo. Siphakamisa ukuthi sithole idolobha lase Dubai noma umongameli wedolobha lase Dubai nge-Instagram. Izindawo ezibaluleke kakhulu zamasiko nezemidlalo.
Ukuqokwa kwalaba abasebenzisi abathandwayo ku-Instagram. Kungabangela ukuthi laba bantu bachofoze esithombeni esithombeni sakho noma badinga isithombe sakho kubantu abavele bahlala endaweni ethile. Yebo, kuzokusiza ukwandise hhayi kuphela inani labantu ababona izincwadi zakho ku-Instagram kodwa futhi kukusize uthole abantu abahlobene nesihloko osifunayo.
Ngakho-ke uthola kanjani abalandeli ku-instagram esikhathini esingaphansi endaweni yakho? Bheka, yebo, ku-VIPs, abantu abaxhunywe kuthelevishini noma ekukhangiseni. Maka futhi wengeze ulwazi uma omunye wabo ephendula futhi ngidinga isithombe sakho kumshini, uzothola abantu abangamakhulu ambalwa kuphrofayela yakho.
I-8 Sebenzisa i-geotargeting ku-Instagram
Sebenzisa i-geotargeting - lokhu kuyindlela ehle kakhulu uma kuziwa endaweni yokuhlala yebhizinisi lakho. Ngoba uma ufuna inkampani ongathanda ukusebenza kuyo noma ufuna amanye amakhasimende. Siphakamisa ukuthi wena, ngokwesibonelo, wengeze indawo yakho kumkhankaso wokukhangisa we-Instagram. Uma uqhuba ibhizinisi ku-Krakow, akusizi ngalutho ukufuna amaklayenti kusuka, athi, i-Gdansk. Ngakho abathandi abavela ngaphandle kwendawo ekhethiwe abakukhathaleli ngempela uma unebhizinisi elisebenza kuphela emakethe yendawo.
Uma ufuna ukuthuthela kuwo wonke u-UAE, vele ungeze amadolobha isibonelo #Dubai no #Abu Dhabi noma #Sharja. I-geolocation isesimweni esihle kakhulu ngoba umshini ukhombisa ukuthi umuntu utholakala kuleso sifunda ukuthi inkampani yakho ikhuthaza umkhiqizo walesi sifunda. Futhi kufanelekile ukuhlola futhi ungeze indawo ongayikhetha, engeza isithombe noma ividiyo.
I-9. Landela bese ulandela abanye abathengisi
Indlela enhle yokwenyusa isibalo sabalandeli ukulandela umkhondo osuvele wenziwe ngaphambili. Ukwenza isibonelo, umsunguli wenkampani yethu nguJohn West obesephatha amawebhusayithi eDubai iminyaka eminingi. Kungaba ukuhamba ngokuhlakanipha ukumane ulandele iphrofayili yakhe ku-linkin noma ku-Facebook. Bona lokho okufakelwa yilesi sivakashi nokuthi ungeza kanjani.
Ngobuchwepheshe, yiqiniso, i-100% isemthethweni futhi ayidingi ukutshalwa kwemali kuwe. Umuntu olandelayo esingakuncoma ukuthi ungowaseJohn West. Lokhu kungukukhula okuholela kokukhula kusuka eMelika. Futhi ngempumelelo uma ulalela kancane futhi ufunda ngokukhangisa futhi uzokwazi nokuhlaziya yonke imininingwane nokuthi ungakha kanjani umkhiqizo onamandla kwi-Intanethi.
Sikholelwa, abaningi balaba bantu abathandwayo kuwebhu. Futhi wazama ukufunda ukuthi ungathola kanjani abalandeli ku-instagram ngokuhlola abanye. Ngena kumaphrofayela abo ukuhlola amasu abo wokumaketha usuku nosuku bese uvele usebenzise izinhlelo ezifanayo kumawebhusayithi abo nakumaphrofayli abo omphakathi.
I-10. I-Systematics ekuthuthukiseni iphrofayela ku-Instagram
Into ebaluleke kakhulu yisenzo. Ukuhleleka kuyisihluthulelo sempumelelo. Ukuqaliswa kwezinhlelo ezintsha kanye nokwengezwa kweziteshi ezintsha zokumaketha kubaluleke kakhulu. Ukukhuthaza ku-Facebook ukungeza okuthunyelwe ku-linkedin kukho konke okudingayo ukuhlanganisa konke. Sekuyisikhathi sokwengeza ulwazi usuku nosuku ukuvumela izinjini zokucwaninga ukuthi ziqonde ukuthi ufuna ukuthini.
Kuthatha isikhathi esiningi ukuthuthukisa umkhiqizo wakho kumabonakude ezenhlalo. Ngakho-ke, ngaphezu kokuzenzekelayo ngezikhathi ezithile kuyafaneleka ukungena ukuze ufunde ngemikhiqizo emisha embonini. Ukuthengisa kushintsha usuku nosuku, okwakuphumelele ezinyangeni ze-6 ezedlule futhi kungenzeka ukuthi kakade akusebenzi ngokuphelele.
Zama njalo ukuzibuza ukuthi okubaluleke kakhulu ukuthi uthole kanjani abalandeli ku-instagram. Uthola kanjani imali ngalokhu?
Ukufingqa kanjani ukuthi ungathola kanjani abalandeli ku-instagram?
Ngeshwa, ukuthola inombolo enkulu yabantu abalandela iphrofayela yakho yomphakathi. Kufanele ube nezithombe ezipholile futhi usebenzise amavidiyo ku-YouTube. Indlela enhle kakhulu ukuphromotha iphrofayli yakho kwezinye iziteshi zevidiyo, njenge-metacafe ne-pintere.
Ukusebenzisa amasu ethu nokululekwa ngokujulile kuzokuvumela ukuba uthole inamba enkulu yabalandeli hhayi kuphela ku-Instagram kodwa naku-Facebook. Ngeshwa, lokhu akukwazi ukufezwa ngomthwalo ophansi wokusebenza. Kumelwe ucabangisise ngempela isu lakho lokumaketha. Ngoba isikhathi esinikezelwe ukuqoqa iqembu elikhulu labalandeli futhi abasebenzisa abasebenzisi ku-Instagram kuzothatha impilo yakho eminingi.
Futhi ukufingqa indlela yokuthola abalandeli ku-Instagram bazama ukwenza iphrofayela yakho igcwele ngokugcwele okukhangayo futhi okunamandla futhi ukhumbule ukwengeza ukuthengisa kwakho kwe-imeyili nakwezinye iziteshi zenhlalo, isibonelo i-Facebook ne-pinterest. Zama njalo ukubandakanya nokubeka amazwana kuzithombe zabanye abasebenzisi.
Zama ungalokothi uzivelele ngokulandela abanye. Ngoba i-Instagram ine-spammer evimbela ukuhlunga. Ngakho ukulandela abantu abaningi kungabangela ukuvimbela i-akhawunti yakho futhi kunzima kakhulu ukubuyela emuva.
Amasayithi e-Warsaw kuphela kusuka e-Dubai City Company!
I-SEO ephawulekayo ye-Warsaw amawebhusayithi kuphela kusuka kwi-Dubai City Company!
Amawebhusayithi eWarsaw yilokhu okufunayo? - Noma yi-50% yabantu abenza ibhizinisi e-Warsaw. Futhi ukusebenza ezindaweni zokukhangisa nokuthengiswa kwe-intanethi.
Eqinisweni, uyazibuza ukuthi kubiza kangakanani ukubeka iwebhusayithi ku-Google. Wonke umuntu uyazi ukuthi iWarsaw ibhizinisi elihlanzekile.
Impendulo ayilula nhlobo. Uma kunjalo uma kuziwa edolobheni elinjenge-Warsaw.
Empeleni, amanani ancike lapha ezintweni eziningi, alukho uhlu olunzima lwamanani we-SEO noma ukuma kwendawo.
Ngaphambi kokuba siqale sicabange ngokubeka iwebhusayithi yethu noma esitolo se-intanethi. Kunezici eziningi okufanele zicatshangelwe.
Ukumiswa kwamaqembu e-Warsaw ne-Dubai City Company
Isibonelo, imboni lapho sifuna ukubeka khona inkampani. Khona-ke ukuncintisana komkhakha ku-Google.
Udinga futhi ukuhlola imiphumela emaqenjini abalulekile wokuhlola. Yiqiniso, yilabo kuphela esifuna ukukwenza ukuthi isayithi lincintisane.
Kuyafaneleka futhi ukuhlola ukuthi imaphi isimo sewebhu okwamanje nokuthi kungakanani iminyaka emakethe.
Khona-ke ilungiselelwe ngokweziqondiso zenjini yokusesha yeGoogle nokuthi kungakanani okuqukethwe okuthunyelwe.
Okokuqala Hlola: Site Checker Pro
Ngena bese uhlola i-SEO: https://sitechecker.pro/en/
Khona-ke: Phakamisa U-Neil Patel Uber
Kuyafaneleka ukungena nokuhlola i-Neil Patel Ubersuggest:
Zikhethele ulimi lwesiPolish futhi ubone ukuthi kunzima kangakanani ukubeka isib izimoto eWarsaw noma, isibonelo: amawebhusayithi abeka iLegionowo
Iyini izindleko zokubeka amawebhusayithi eWarsaw?
Kumele uqaphele ukuthi, ngokwesibonelo, lezi zinhlobo zemigomo elandelayo: Ukubeka i-Warsaw Amakhasi yizindawo ezigcwele kakhulu yizinhloli ze-SEO.
Ngakho-ke uma singabomkhakha othandwa kakhulu njengezimoto, ama-nightclub, amahhotela noma i-SEO. Khona-ke hhayi kuphela inani lokubeka ku-Google kuzoba liphakeme, kodwa futhi isikhathi sokubeka sizokweluleka.
Ngokufanayo, uma sifuna ukubeka iwebhusayithi edolobheni elikhulu, njenge-Kraków noma i-Łódź.
Inani lentengo enhle kwi-website yokubeka indawo ngokuqinisekile kuzokhula. Ngakho kuzothatha ochwepheshe bethu isikhathi esiningi sokuphakamisa isikhundla sesayithi lakho ku-Bing noma ku-Google.
Yini Okumele Uyikhumbule ngesikhathi sokubeka?
Noma kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukubeka iwebhusayithi kuyindlela eyenza izinzuzo zesikhathi eside kanye nomsebenzi owenziwe ngokuqinisekile uyovumela ukuthi umkhiqizo uhlanganiswe ekuqapheleni kwabasebenzisi kanye nokukhona ezindaweni ezihle ku-Google ngisho nangemva kokuphela kwemisebenzi .
Kubiza malini ukubeka amaqembu e-Warsaw?
Izindleko eziyisisekelo zokuma nenkampani yethu i-PLN 350. Leli akuyona intengo eqondile uma sikhuluma lapha mayelana nohlobo lwesihloko: ukuma kwekhasi le-Warsaw Centralan noma i-Old Town.
Ukuxhumana okusheshayo kithi?
05-119 legionowo, ul. I-Piaskowa 35 / 25
ifoni. + 48 536 003 117
Inqubomgomo yenkampani yethu ukwandisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho ku-injini yokusesha ye-Google. Ngomuntu siqu, khuluma nomunye wabathengisi abahamba phambili ePoland.
I-SEO noma ukucinga injini yokusesha ku-Warsaw kuyinkqubo edinga ukuthatha isinyathelo esifanele. Isibonelo, ukubeka amawebhusayithi. I-Warsaw yiprojekthi yethu ehamba phambili.
Senza njalo ukuhlolwa kwewebhu ngokufanele. Isibonelo imisebenzi ekushintsheni ikhodi ye-HTML. Futhi njengengxenye yenqubo yokubeka iwebhusayithi, sizama futhi ukunika amandla ama-akhawunti wezenhlalo aphumelelayo njenge-Instagram.
Ngaphezu kwe-90% yamaklayenti ethu azofinyelela izinga eliphakeme kakhulu lamakhasimende ngokubeka amawebhusayithi e-Warsaw.
Ngoba isikhundla siphume emiphumeleni yokusesha cishe ngaso sonke isikhathi kubangela amakhasimende amasha avela ku-Google. Lokhu, futhi, kuhumusha ekuboneni okukhulu kwenkampani yakho ku-Google, i-Bing, i-Yahoo kanye ne-Facebook. Ngakho sifinyelela iqembu elibanzi lamaklayenti angakhona. Izinzuzo ezifanayo.
I-SEO ephathekayo enhle futhi ephumelelayo izohlala isithatha inselelo yokubeka iwebhusayithi edolobheni elinjenge-Warsaw.
Izinto ezithinta intengo yokuma iwebhusayithi kuwe naseWarsaw nakwezinye izingxenye zasePoland.
Yini okufanele icatshangwe ngokuphathelene nokuma kwewebhusayithi yakho eMazovia?
njengoba sishilo ekuqaleni, ingxenye yezici eziningi, njenge:
Nginikeza ukusebenzisana ne-ejensi ehamba phambili yokukhangisa e Dubai.
Ngihlale ngibeka ngendlela esobala ububanzi bemisebenzi yami nokuthi sizobeka kanjani iwebhusayithi yakho eWarsaw.
Ingxenye yokuqala yenqubo yethu yokubeka kuyoba yi-SEO audit.
I-Positioning / SEO yisigaba esivamile sokuhlaziywa. Okokuqala, isitolo noma iwebhusayithi kumele ihlolwe ngokwejubane ku-Google.
Hlola ukusheshisa kwekhasi ku-Google
Ungakwenza ngokwakho lapha:
Into ebaluleke kakhulu ukubona ukuthi yiliphi negunya iwebhusayithi yakho.
Kuyafaneleka futhi ukuhlola inani lezixhumanisi ezingenayo nezingenayo eziya esizindeni.
Hlola lapha: https://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/
Ngemuva kokuhlola i-DA - Isiphathimandla Sesizinda kanye ne-PA - Page Authority. Lokhu akuyona isici se-Google simo kodwa kufanele sibone.
Kuyafaneleka ukuhlola inani lemiphumela yokusesha yemvelo ku-Google. Futhi zingaki izici ezingathinta ukuma kwekhasi.
Ngokwesilinganiso, intengo yokubeka i-website eWarsaw iphinde ihlanganise ukudala okuqukethwe kubhulogi nokuthuthukisa isayithi ngokwemagama angukhiye akhethwe iklayenti. Okusho ukuthi, ngokufushane, wena.
Yini esiyikhokha ngokukhethekile ekubekeni inkampani yakho?
Inkampani yethu okwamanje igcizelela ngokwengeziwe ibhulogi ebalulekile nokuqukethwe okushicilelwe kumaforamu angaphandle.
Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi amawebusayithi esiwaseWarsaw anikeze abafundi babo, yebo, futhi injini ye-Google yokusesha engcono kakhulu nemibono engqondweni yami engokuqukethwe okubaluleke kakhulu ku-Google.
Kumele sikhumbule ukuthi ngezinye izikhathi amawebhsayithi abuye ahlushwe "ngamaphutha ababeka phambili kusukela esikhathini esidlule" - isibonelo, wakhiwa ezizindeni ezinezinga eliphansi, ngakho-ke baholela ezingeni eliphansi lezingxenyeni zangaphandle.
Ezimweni ezinjalo kufanele silwe kanzima ngezinye izikhathi ngisho namaviki ukwandisa i-SEO.
Izikhundla zethu zizosiza nasezikhungweni ezingenathemba. Lapho ukubeka ku-Google kunzima kakhulu. Ngokuqinisekile, sizokunikeza isisombululo esihle kunazo zonke ebhizinisini lakho.
Yikuphi okuzosivumela ukuba sivele emiphumeleni yosesho nenkampani yakho ePoland.
Izinzuzo Zethu? Sisebenza kulo lonke elaseWarsaw
Senza kuphela ukuthengiswa okuphelele kanye nezinsizakalo zokubeka indawo!
Ngisho, ayikho isinqamuleli esihlokweni sokubeka amawebhusayithi eWarsaw.
Sonke, sineminyaka engaphezu kwe-150 yesikhundla ekubekeni amawebhusayithi e-Warsaw.
Senza ukubeka kahle kwamawebhusayithi e-Warsaw. Ngakho amawebhusayithi wamaklayenti ethu ahlala esesikhundleni esiphakeme ku-Bing ne-Google.
Sikumema ukuthi uzijwayele ngesipho sethu (izindawo eziqondile lapho sibeka khona ngezansi) nolwazi ukuqala ukubambisana eWarsaw.
Siyi-ejensi ehlinzekwa ukubeka indawo nezinkampani ezinesidingo esiphakeme eWarsaw. Abaphathi bethu bakhonza ngempumelelo amaklayenti acebile kusukela enhloko-dolobha.
Ungasithola ku-OLX e-Warsaw!
Bona incazelo eningiliziwe ye-website ukubeka e-Warsaw.
Ukumiswa kweWarsaw Wilanów
Ngakho ukubeka amawebhusayithi eWarsaw kuyohlale kuyisihloko esiyinhloko kithi. Ngakho-ke ochwepheshe bethu baqeqeshwa kule nqubo iminyaka eminingi.
Sibheka njalo inkampani ngayinye ngendlela ehlelekile futhi eqondakalayo futhi ngamunye ngamunye ngamunye. Esihlokweni sokubeka amawebhusayithi we-divisor - i-Warsaw. Asinakho okulinganayo.
Ngoba siyazi amathuba emakethe futhi sakha amasu okuthuthukiswa ngabanye ebhizinisini ngalinye. Ngenxa yokuthi sifinyelela kuphela iqembu elifanele labamukeli.
Sisebenzisa kuphela amathuluzi wokuthengisa e-intanethi okuzokwenza ukwazi ukunqoba izikhundla ezingaphezulu ku-Google.
Ulwazi, amakhono kanye ne-Dubai okuhlangenwe nakho kokubeka amakhasi ngesiNgisi nangesi-Arabhu, kuqinisekisa ukunqotshwa kwamawebhusayithi okuncintisana kwi-Inthanethi.
Ukukhangisa okwanele nokukhangisa kwe-intanethi kuzokwenza i-Dubai City Inkampani ikwandise ukuthengiswa komkhiqizo wakho.
Inkampani yethu ithimba elizokwenza uzizwe uqiniseka kakhulu emakethe futhi uyokwandisa inombolo yokusesha umkhiqizo wakho / amasevisi wakho ukubeka amawebhusayithi eWarsaw futhi kuzokuvumela ukuba ujabulele izinzuzo eziqhubekayo zenkampani yakho.
Konke ngenxa yokuma okusebenzayo neshibhile eWarsaw. Nakuba kunzima ukukholelwa, lezi zichasiselo ezimbili ziyahambisana.